That's so good, right?: October 2010
စရိုက်ဆန်သော အမှုအခင်းတင်းကြမ်းပြည့်နှက်နေတဲ့ ရပ်ကွက်တွေရှိရာ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ကျွန်တော် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်ဂျာနယ်ကောက်လှန်လှန် ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကလူတွေပဲ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သလားအောက်မေ့ရမှာ။ ဆုံးမတဲ့မိဘဆရာ သမားမရှိဘူးလား မေးရင်တော့ မေးသူစိတ်ညစ်သွားရပါမယ်။ 'ကိုယ်ဦးကိုယ်ဆော်ကွ....အဲဒီလိုမှ မလုပ်နိုင်ရင် မင်းလူညံ့' တဲ့ လက်ဦး ဆရာကဆုံးမတာ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကကြမ်း စည်းကမ်းဆိုတာ ပါးစပ်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ တခြားကမ္ဘာက ရောက်လာ တဲ့ဂြိုလ်သား။ အပြုအမူအပြောအဆိုတွေက သိပ်ကိုထူးဆန်းသတဲ့။ နုညံ့အသွားအလာ၊ အပြောအဆိုယဉ်ကျေး၊ အပေါင်းအသင်းတွေက ပညာတတ်၊ ကျောင်းစာကို တကုတ်ကုတ်လုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်မို့။ အဖေက ညည သူ့ဘော်ဒါတွေနှင့် ၀ိုင်းဖွဲ့တဲ့အခါ လိုက်လိုက် ပို့ခိုင်းပြီး အတူဝိုင်းထိုင်ခိုင်းရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ အိမ်ပြန်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို နပန်းအုပ်တယ်။
ထားပါတော့ ဆယ်ကျော်သက်လွန် ကျွန်တော်ဂြိုလ်သားလေးရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ဘ၀ကိုများ အဲဒီတုန်းကတည်းက အဖေသိခဲ့ရင် ဓားနှင့် လိုက်ခုတ်ခဲ့မှာဗျ။ အဲဒါဘာလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူ 'gay' ဖြစ်နေခြင်းလေ။ သိပ်တော့မထူး ဆန်းပါဘူးဗျာ .... ကျောင်းစာမလိုက်နိုင်လို့ သိချင်တာရှိရင် သွားသွားမေးလို့ရတဲ့ ဆရာတစ်ပိုင်း သူငယ်ချင်းရဲ့အစ်ကိုနှင့် အတွေ့ အကြုံသစ်ကိုရရှိခဲ့ တာပါ။ ဒါကြောင့် အစိမ်းသက်သက် လေးတော့မဟုတ်ခဲ့ရပါ။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ မရှိတဲ့ လှပတဲ့အစိတ် အပိုင်းတွေ တခြားသူမှာရှိရင် သဘောကျပြီး တပ်မက်တတ်တဲ့စိတ်ကများ ဒီဘ၀ကို ပိုမိုစွဲလန်းစေခဲ့သလားမသေချာ။
ကြီးပြင်းရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ရရှိထားသော အပေါင်းအသင်းတွေက စိန်ပွင့်တွေပါပဲ ကျွန်တော့်အတွက်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဖေးမတယ်၊ မရှိအတူ ရှိအတူပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမကောင်းတာတွေဘက် ဘယ်တော့မှ ခြေမလှမ်းတာအမှန်တရားပါ။ စလောင်းကလာတဲ့ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေ အကြောင်း၊ ကျောင်းက အားကစားအချိန်တွေမှာ တခြားအတန်းက ကျောင်းသားတွေနှင့် ဘယ်လိုပြိုင်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်းတွေသာ စကားဝိုင်းတွေရဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ လက်ဖက်ရည်တိုက်ကြေးနှင့် ရှုံးသူ တီရှပ်တစ်ထည် ၀ယ်ပေးဆိုတာတွေကသာ လောင်းကြေးဖြစ်တယ်။
အခိုင်အမာ ဘော်ဒါအုပ်စုဝင်တွေထဲမှာ 'ကျော်ကျော'်က အရပ် ၆ပေရှည်ပြီး အတော်ပိန်သွယ်တာ။ အသက်က ၁၉၀န်းကျင်ဖြစ်မယ်ထင် တယ်။ သူ့ကြည့်လိုက်ရင် ဆံပင်က ရှုပ်ပွပွ၊ အဖြူရောင် trainer ဘောင်းဘီရှည်၊ အားကစားအသင်းရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်၊ ဘေ့စ်ဘော ဦးထုပ် နောက်ပြန်ဆောင်းလို့ဆိုတာ သူ့စတိုလ်။ Liverpool အသင်းရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်ပေါ့သူက။ ကျော်ကျော်က 'Tesco Supermarket' ရဲ့ ဂိုထောင်မှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အုပ်စုဝင်နှစ်ယောက်ကတော့ 'ဖြိုးဝေနှင့် မိုးဝေ' အမွှာညီအစ်ကိုပါ။ သူတို့ကို မှတ်ချက်ချရရင်တော့ အရာအားလုံးထပ်တူ နည်းပါးကျပါတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ နှစ်ယောက်လုံးမတ်တပ်ရပ်လိုက်ရင် ၅ပေ ၉လက်မရှည်ကြမယ်အရပ်တွေက။ ရပ်ကွက်ထိပ်က gym မှာ သွားသွားကစားကြတော့ နှစ်ယောက်သား ဘော်ဒီတွေက fit ဖြစ်ပြီးတောင့်တင်းကြပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံး ဆံပင်တွေက နဂိုကောက် လေး တွေ။ ပြီးတော့ ဂျင်းနဲ့တီရှပ်ရှိရင်ပြီးပြီဆိုတာ သူတို့စတိုင်လ်ပေါ့ ဘယ်ရာသီမဆို။ နှစ်ယောက်လုံးကကြည့်ကောင်းပြီး အပြုံးချိုတော့ မိန်းကလေးတွေကြား ရေပန်းစားပါတယ်။ ဖြိုးဝေက ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေ ထိန်းသိမ်း တဲ့ဋ္ဌာနမှာလုပ်သလို မိုးဝေကတော့ Furniture တွေရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမှာ အရောင်းသမားလေးပေါ့။
လေးယောက်မြောက် အဖွဲ့ဝင်ကတော့ ကိုလတ်လို့ ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ 'တင်ဇော်လတ်'ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဘော့်စ်ပါ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုထဲမှာတော့လေ။ သူ့အဖေက တရုတ်စားသောက်ဆိုင် (၆)ဆိုင် တစ်မြို့လုံးမှာ ခွဲပြီးဖွင့်ထားတာ ကိုလတ်က ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ရဲ့ ထိပ်မှာရှိတဲ့ ဆိုင်ခွဲတစ်ခုကို ဦးစီးသူပါ။ အဲဒီဆိုင်ကို ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါလေးယောက်သွားသွားစားရင် မျက်မှန်းတန်းမိကာ ဘော်ဒါတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ မူဆယ်မြို့မှာမွေးခဲ့ပြီး သူ့အမေက တရုတ်စစ်စစ်၊ အဖေက ရှမ်းစစ်စစ်ဆိုတော့ သွေးနှောထားတဲ့ ကိုလတ်ဟာ ထင်မှတ်ထားတာထက် အရပ်မြင့်ကာ ကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ရှိသူပါပဲ။ ဆံပင်တွေကို Hair Gel တွေလိမ်းပြီးထောင် ထားရတာ အမော။ အိမ်တွင် ကိရိယာလွတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူမို့ သိပ်မထွားပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ရယ်ပြုံး လိုက်တိုင်း ဖြူဖွေးပြီး တောက်ပတဲ့ သွားတွေက သူ့ Trade Mark.
ကျွန်တော့်အကြောင်းကတော့ထားပါ။ အခုလောလောဆယ်အခြေအနေကိုပြောပြမယ်။ အဖေရှိသမျှပိုက်ဆံကိုယူပြီး အိမ်ပေါ်ကဆင်း သွားတာ မကြာသေးပါဘူး။ အမေက အားကိုးရာမရှိဆိုပြီး နောက်ယောက်ျားထပ်ယူတာ ကျွန်တော်နှင့် ပထွေးလုံးဝအစေးမကပ်တာ ကြောင့် အိမ်မှာမနေတော့ဘဲ ဦးလေးလူပျိုကြီးအခန်းမှာ နေနေတာလောလောဆယ်။ သူက သင်္ဘောလိုက်နေတာဆိုတော့ နေသူမရှိဖြစ် နေတာ ကျွန်တော် နေထိုင်တာဆိုတော့ အိုကေပါသတဲ့လေ။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်ကာကွယ်ဖို့ကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက အိမ် ဘေးက ဆရာကြီးဖွင့်ထားတဲ့ ကာရာတေးကလပ်မှာ အလကားကစားလာတာ လက်ထောက်နည်းပြသဘောတောင်ဖြစ်လို့။ အရပ် ၅ပေ ၁၀လက်မခန့်ရှိပြီး ရုပ်ရည်ချောမောတယ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေ အပြောနှင့်အညီ ရည်းစားကောင်မလေးတွေဝိုင်းနေတာ စီမံခန့်ခွဲမှု အတတ်ပညာတောင် သွားသင်စရာမလို။ အပေါင်းအသင်းတွေကြား ဖိုးစွံကျွန်တော်က တကယ်တမ်း ဂေးဖြစ်နေတာ သူတို့မသိနော် ...ဟီး။
တစ်ခါတလေ လာလာပေါင်းတတ်တဲ့ ဘော်ဒါတစ်ယောက်လည်းရှိသေးတယ်။ သူကတော့ လက်ထပ်ထားတာမကြာသေးတဲ့ ကျော်သူဟန်ပါ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်မယ့် အပျော်ကြူးပွဲလေး လုပ်မယ့်အကြောင်း သူကြားပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးလာခဲ့တဲ့ဘော်ဒါပေါ့။ အခုတော့သူနယ်ပြောင်းသွားပြီလေ။ နိုဝင်ဘာလလယ် ဘော်ဒါတွေစုပြီး သောက်ကြမယ် စားကြမယ် ပြီးတော့ ညလုံးပေါက် ကြိုက်တာ လုပ်ကြတဲ့ အစီအစဉ်လေးပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း အခုလိုနှစ်ဦးပိုင်းကတည်းက ပိုက်ဆံစုနေကြပြီလေ။ ပိုက်ဆံဘယ်ကရရမှာလဲ ? ကျွန်တော်က အခု အာမခံရုံးတစ်ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေပြီဗျ။
ကျွန်တော့်ဦးလေးရဲ့ Condo တိုက်ခန်းကြီးက ဒီနှစ်ကျွန်တော်တို့ ဘိအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတာပေါ့။ အိပ်ခန်း (၃)ခန်းပါတယ်၊ ချက်ပြုတ်စားသောက်ဖို့ မီးဖိုချောင်က အဆင်သင့်။ ဈေးဝယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားရုံပါပဲ။ ကြာသပတေးနေ့ည လူစုမယ် ပြီးတော့ တနင်္လာညမှာ အဆုံးသတ်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြမယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ အဆင်ပြေရာ ဘော်ဒါတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အခန်းမှာ မလွတ်မလပ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာ။ အခုတော့...ဟူး...ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အမေ့ကို သတိရတယ်။ တိုက်ခန်းဟောင်းမှာ ပထွေးနဲ့အဆင်ပြေကြသလားမသိဘူး။
ကိုလတ်က သူ့ဆိုင်မှာ သောက်ရင် ဆူခံထိမှာမို့ မြို့ထဲက ကလပ်မှာအ၀သောက်ရင်းပြန်လာခဲ့ကြတယ် ကျွန်တော့်အခန်းကို။ အမြွှာနှစ်ယောက် ဆိုဖာပေါ်မှာ သေနေကျတော့ ကိုလတ်ရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်၊ကျော်ကျော်ရယ် ဘီယာတစ်ခွက်စီ ထပ်ကစ်နေ ကြပြန်ရော။ အိပ်မောကျနေတဲ့ အမြွှာတို့ကိုကြည့်ပြီး ကျော်ကျော့် အိုင်ဒီယာထွက်လာတယ်။ သူတို့ဘောင်းဘီတွေကိုချွတ် shaving foam တွေကို ငပဲတွေပေါ်ဖြန်း ဗီဒီယိုရိုက်ကာ YouTubeပေါ်တင်ဖို့။ ကျွန်တော် မတားမြစ်မိပါဘူး အမြွှာတွေရဲ့ ဒုတ်တွေကဘယ် လောက်ရှိမလဲ ပိုသိချင်နေမိတာကိုး။
ကိုလတ်လည်း ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကို ပါဝင်ကူညီရင်း ရယ်ပွဲဖွဲ့ကြတာ ဟိုနှစ်ကောင်မနိုးဘူး အံ့ချက်။ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေကို တဖြည်းဖြည်းလျှောချ အောက်ခံ boxer ဘောင်းဘီတိုတွေဆွဲချွတ်လိုက်တော့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ဒစ်တွေက ၀ါဆိုဖယောင်းတိုင်ကြီး တွေလို အရွယ်ညီပြီး ရွှေဥတွေနှင့်လိုက်ဖက်စွာလှဲလျောင်းနေပါတယ်။ ကိုလတ် စတင်ပြီး ဗီဒီယိုရိုက်တယ်၊ပြီးတော့ ကျော်ကျော်က အကြုံပြုပါရဲ့ ငနဲနှစ်ကောင်ပစ္စည်းတွေ မာတောင်လာအောင်လုပ်ပြီး ရိုက်ဖို့။ YouTube ကဒါမျိုးတွေကို လူအများကြည့်ဖို့ ချပြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိပေမဲ့ ကျော်ကျော်ကို ဘာမှမပြောဖြစ်ခဲ့ပါ။
'ငါ သူတို့-ီးတွေကို မကိုင်ချင်ဘူး'
'မင်းအဲဒီကိစ္စကိုလုပ်လိုက်။ သူတို့နိုးလာရင် ထိန်းဖို့ ငါတာဝန်ယူတယ်'
ကျော်ကျော်က ကျွန်တော့်ကိုပြောတာကြောင့် စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ဆောင်မိပါတယ် ပေးအပ်လာတဲ့တာဝန်ကို။ ငပဲနှစ်ချောင်းကိုဆွဲကိုင် ငြင်ငြင်သာသာပွတ်သပ်လှုပ်ရှားဖြစ်တာ ကျွန်တော် အံ့သြသွားစရာ လက်ထဲမှာ တဖြည်းဖြည်းထွားလာတာပေါ့။ နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောင်းပြီးလုပ်တော့လည်း မာတောင်လာတာ ၆လက်မရှည်တယ် ကျောက်သားအလားပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နိုးနေတဲ့သုံးယောက်က တဟီးဟီးရယ်မောကြရင်း အမြွှာတွေရဲ့ ပစ္စည်းပေါ် အမြှုပ်တွေဖုံးစေကာ ဗီဒီယိုဆက်ရိုက်ကြပါတယ်။ ခဏနေတော့ ဆိုဖာပေါ်အလိုက်သင့်ထားခဲ့ကြရင်း အိပ်ခန်းထဲဝင် အိပ်စက်ကြပါတယ်။ ကျော်ကျော်ကတော့ ကိုလတ်နှင့် သွားအိပ်တယ်လေ။
မနက် (၃း၀၀)နာရီထိုး ဆီးသွားချင်တာကြောင့် နိုးထလာမိတဲ့ ကျွန်တော် ထဲဆီးသွားပြီး ရှေ့ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ်လှဲနေတဲ့ နှစ်ယောက်ကို သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အားရစရာပစ္စည်းတွေကို ကိုင်ကြည့်ပြီးမှ အိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်ခဲ့တာပေါ့လေ။
'ခွေးကောင်တွေ ငါတို့ကိုဘာလုပ်ထားလဲမသိဘူး၊ ကြည့်စမ်း ဖြိုးဝေ'
အိပ်ခန်းထဲက သုံးယောက်လုံး ဟားတိုက်ရယ်မောမိပြီး နိုးထာလာရပါတယ် မနက်ခင်းမှာတော့။ ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မနက်ခင်းပေါ့ ပေါ့ပါးပါးအစာတွေကို သူတို့စားသောက်ပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ တနေကုန်ဘာအစီအစဉ်မှမရှိရုံးပိတ်တာကြောင့် ညဘက် စောစောလူစုပြီး သွားသောက်ကြဖို့အတည်ပြုကြတယ်ပေါ့။
အခန်းသော့တစ်ချောင်းကို 'ကိုလတ်'ကိုပေး ကျွန်တော်အမေတို့ရှိရာသွားနေဖြစ်တယ် တနေကုန်။ ပထွေးက ကျွန်တော်နှင့် အဆင်မပြေ တာကလွဲလို့ အမေနှင့်အဆင်ပြေလို့တော်ပါသေးရဲ့။ အမေ့ကို စားသောက်စရာတွေဝယ်ပေး ပိုက်ဆံနည်းနည်း ကန်တော့ခဲ့ကာ ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ ညနေပိုင်းလူစုဖို့ပြောထားတာ မသွားနိုင်ခဲ့ပဲ အခုည ၁၁း၃၀မှ တိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရတာ။ ကိုလတ်က အခန်းထဲ ခုတင်ပေါ် ထိုင်နေသလို အမြွှာနှစ်ယောက်ကိုတော့ မမြင်ခဲ့မိဘူး။
အခန်းထဲဝင်ရေချိုးပြီး လန်းဆန်းသွားအောင်လုပ်ဖြစ်ရပါတယ်။ရေကို၀၀သောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရေဓာတ်ပြန်ဖြည့်ရသည်ပေါ့။ CK ဘောင်းဘီတိုလေးကောက်စွတ်ကာ ဧည့်ခန်းဘက်ပြန်ထွက်တော့ ကိုလတ်တို့အခန်းတံခါးကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထားတာကို မြင်ရရော။ အိပ်ယာပေါ်မှာလူရိပ်တစ်ခုလှဲနေတယ်။ အဲဒါ ကျော်ကျော်ဖြစ်မှာ။
'ဟေး...ငါ့ကောင် မင်းပြန်ရောက်တာ မသိလိုက်ဘူး'
ခဏတာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးနောက် ကျွန်တော်အခန်းမီးကို ဖွင့်လိုက်တာ လင်းလက်သွားပါရော။ ကျော်ကျော်တစ်ယောက် ခြေထောက် တစ်ဖက်ကို အပြင်ထုတ် အခြားတစ်ဖက်ကတော့ ဘောင်းဘီရှည်ထဲ တစ်ဝက်တပျက်ထည့်ကာ အိပ်နေရဲ့။ အပေါ်က တီရှပ်ကိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ခေါင်းပေါ်မတင်လျက်။ ရင်ဘတ်က အမွှေးနုတစ်ချို့ကို မြင်နေရသလို တစ်ဝက်လောက်အောက်လျောနေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကြောင့် ဆီးခုံမွှေးအချို့ကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ အ၀တ်လဲဖို့လုပ်ရင်း မဟန်နိုင်တော့ဘဲ အိပ်ပျော်သွားခြင်းထင်ပါရဲ့လေ။
'C'mon ဘော်ဒါ၊ ငါကူညီပါ့မယ်' အသံကျယ်ကျယ် ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်း ကျော်ကျော်ခန္ဓာကိုယ်ကို အိပ်ယာပေါ်မတင်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ကိုယ် အဲဒီလောက်လေးမှန်း ခုတင်ပေါ်မရွှေ့မှ သိရပေါ့။ အလိုက်သင့်အိပ်ယာပေါ်လှဲနေရတဲ့ အနေအထားဖြစ်ပြီးနောက် သူနှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက်အိပ်စက်သံပေါ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေဘာကြောင့်လဲမသိ မလုံသလိုဖြစ်မိတာကြောင့် တိုက်ခန်းတံခါးကို အသေ အချာပိတ် သော့ခတ်ပြီးမှ အိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်မိတာပါ။
'မင်းကလည်းကွာ အအိပ်ကြမ်းလိုက်တာ' အသံကျယ်ကျယ်ပြောလိုက်ရင်း သူ့တီရှပ်အင်္ကျီကို ခေါင်းပေါ်ကနေ ချွတ်ပေးလိုက်တယ်။ အင်္ကျီလည်းချွတ်ပေးပြီးရော အိပ်ယာပေါ် ၀ုန်းကနဲပြန်လဲတာပါပဲသူက။
ကျွန်တော် သူ့အားကစားဘောင်းဘီရှည်နှင့် ခြေအိတ်တွေကိုချွတ်ပြီးနောက် သူ့ခြေထောက်တွေကို အိပ်ယာပေါ်အလိုက်သင့်တင်ပေး လိုက်တယ်။ သူ့ပါးပြင်ကို တစ်ချက် အသာရိုက်ကြည့်၊ တုန့်ပြန်မှုမရှိ။ အသံကျယ်ကျယ်အော်ကာ သူ့လက်မောင်းတွေကို လှုပ်ရမ်းကြည့် တော့လည်း တုန့်ပြန်မှုမရှိပါ။ ကျွန်တော် သူ့ခါးက ဘောင်းဘီကိုကိုင်ပြီး ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တာ ကျော်ကျော့်အမြှောက်တံဟာ သူ့ရွှေဥပေါ် အလိုက်သင့်လဲလှောင်းလျက်။ ဆီးစပ်က ခြုံပုတ်ငယ်က အတော်ထူတယ်။ အမွှေးကောက်ကောက်လေးတွေဟာ အမွှေးအမျှင်သိပ်မများ တဲ့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရင်အုပ်ကြားကနေ ဆီးစပ်အထိအမျှင်တန်းနေတာ ကြည့်လို့ရင်ခုန်သား။ ကျွန်တော့်အခန်းထဲ ပြန်သွားလိုက်ကာ digital camera ကိုဆွဲယူလာလိုက်ကာ သူ့အ၀တ်မဲခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးရောက နောက်လာမယ့် အစီအစဉ်သစ်တွေအတွက်မှတ်တမ်း တင်နိုင်ဖို့ အသေအချာနေရာချလိုက်တယ် ခုတင်ခေါင်းရင်း ဘေးက စားပွဲခုံပေါ်မှာ။ ပြူးပြူးဝိုင်းဝိုင်းရွှေဥတွေပေါ်က ငပဲကို ကျွန်တော် ကိုင်ကြည့်တော့ လေးလက်မလောက်ဘဲရှိသေးပုံပေါ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းထက်တော့ တုတ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ညီဘွားက လည်းအခုကတည်းက အမောက်ထောင်နေပြီ။
သူ့အမြှောက်တံထိပ်ဖူးမှာရှိတဲ့ အရေပြားလေးကို နမ်းကြည့်မိတော့ အနံ့လေးတစ်မျိုးရတယ်။ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက အဲဒီ့အနံ့ဟာ ကျွန်တော့် လိင်စိတ်တွေကို နိုးကြွလာစေတာအမှန်ပါပဲ။ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ရလာခြင်းပဲဆိုပါတော့။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း တွေနှင့် ပျော့နေဆဲငပဲကို ပွတ်သပ်ပြီး စုပ်မျိုလိုက်တယ်။ ပါးစပ်ထဲ လျှာနှင့်ရစ်ပတ်မွှေနှောက်ရင်းလေ။ ကိုယ့်ငပဲကို ကိုယ်လက်တစ်ဖက် ကကိုင်ကာ ဆော့ကစားရင်း သူ့ခြေ ချောင်းတွေကြား တိုးဝင်လိုက်ကာ တစ်ကိုယ်လုံးကို နမ်းရှုံ့၊ တွဲနေတဲ့ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်ပေါ့လေ။ ရွှေဥတွေကို ကိုင်ရင်း တစ်လုံးကို ငုံစုပ်လိုက် တယ် ခဏကြာအောင်။ ပြီးတော့လည်း ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို တပြွတ်ြ့ပွတ်စုပ်။ လက်တစ်ဖက်နှင့် ခက်သွက်သွက်ကစားပေးရင်း ခေါင်းထိပ်ကိုတော့ နှုတ်ခမ်းလွှာတွေကြားညှပ်ရင်း လျှာနှင့်တို့ထိကစားလိုက်တယ်။
ကျော်ကျော် အနည်းငယ်ညည်းညူရင်း အသာဘေးကိုရွှေ့ကာ ခဏနေက အနေအထားအတိုင်း အသက်မှန်မှန်ရှူကာငြိမ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ပစ္စည်းကတော့ သွေးတိုးနှုန်းတွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်ကာ ပြည့်လာပါရော။ ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းလောဘကြီးလာပါပြီ အခုတော့လည်း။ မာတောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို ငုံစုပ်ရုံ အာခံတွင်းထဲအသွင်းအထုတ်လုပ်ရုံနှင့် မကျေနပ်နိုင်တော့သလိုပါ။ စပြီးမာခါစက သိပ်မရှည်ဘဲ ၃မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ ၆လက်မကျော်ကျော်အထိရှည်လာကာ လက်ထဲမှာလည်း ကိုင်ထားရင်း တုတ်လာပါတယ်။ တကယ့် ကိုကျောက်သားဆိုင်ပါ။
စိတ်တွေက အငမ်းမရဖြစ်လာရပါပြီ။ ကင်မရာကို ကောက်ကိုင်လိုက်ကာ ထောင့်ပေါင်းစုံကရိုက်တယ် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေ လျှာ တွေနှင့် စုပ်မျိုနေဆဲပုံရိပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ရင်းပေါ့။ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရင်း ခုတင်ပေါ်တွားတက် လိုက်ကာ တံတွေးတွေနှင့် ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ကျော်ကျော့်ငပဲထိပ်ကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ဆီဖိသွင်းကြည့်တာ သိပ်မရ။ အရင်တုန်းက တစ်ခါမှ အလုပ်မခံခဲ့ဘူးတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကြိုးစားမှုလေးက အရာမထင်။ ခရေ၀ကနေ အတွင်းထဲဝင်ဖို့ ဖိဖိသွင်းလိုက်တိုင်း ဘေးချော်ချော်သွား ကာ နာတာပဲအဖတ်တင်တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ဒုတ်ကိုပြန်ပြီးစုပ်တဲ့ အဆင့်ပြန်လျှောသွားရပါတယ်။ အားရပါးရစုပ်နေတဲ့ သူ့ငပဲရဲ့မာကျောမှုကို သဘောကျရင်း မျက်လွှာပင့် ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော် အလွန်ထိတ်လန့်သွားရပါရော။ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပွင့်ဟနေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေကိုမြင်လိုက်ရတာမို့။ သူ့မသိစိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုတော့ ခံစားသိမိဟန်ဖြင့် ခပ်သဲ့သဲ့ညည်းညူသံပြုပါတယ်။ ကျွန်တော် သူနိုးမထလာတာသေချာလား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးကာ ငပဲကိုဆက်ပြီး စုပ်မှုတ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်မျက်နှာစီ ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်ပါ၏။ နောက်ဆုံးတစ်စက် ပန်း ထုတ်အပြီးမှာတော့ ကျွန်တော် သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းနှင့် ငပဲတစ်ခုလုံး နှုတ်ခမ်းသားများကြားသွင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ပြီးနောက် ခပ်မြန်မြန်ပဲ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်အမြှောက်မှ အရည်တွေကို သူ့ရွှေဥစီပက်ဖြန်းလိုက်ပါတယ်။
ရေချိုးခန်းထဲ အမြန်သွား တဘက်တစ်ထည်ယူလာကာ သူ့ရွှေဥတွေ ငပဲနှင့်တကွ ကျွန်တော့်မျက်နှာတို့ကိုပွတ်သပ်သန့်ရှင်းရတာပေါ့။ ပြီးတော့ သူ့အတွင်းခံ boxer ဘောင်းဘီကိုပြန်ဆွဲတင်ပြီး ၀တ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စောင်ပါးတစ်ထည်ခြုံပေးလိုက်ကာ တီရှပ် ဘောင်းဘီ ရှည်နှင့် သူ့ပစ္စည်းတွေကို ကြမ်းပြင်ပေါ်ဖြန့်ကြဲထားလိုက်တာဗျ။ သူ့ဖာသာ အ၀တ်တွေချွတ်ပြီး တက်အိပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင် ပေါ့။ အားလုံးပြီးတော့ ကင်မရာကိုယူ ကျွန်တော့်အခန်းကို အမြန်ရွေ့လျားရပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ မနက်ခင်း ၁၁နာရီလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖျော်မသောက်ခင်အချိန်ထိ ကျွန်တော်ဘာသံမှမကြားရဘဲ အလောင်းကောင် လို့ အိပ်စက်မိပါတယ်။ ကျော်ကျော်ရဲ့ မျက်နှာကို ရဲရဲတောင်မကြည့်ရဲပါဘူး ကျွန်တော့်မှာလေ။ သူကတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ရလို့ စွမ်းအင်ပြည့်နေတဲ့ဟန်နဲ့ ဘာမှမပြောဘဲ အိမ်ပြန်သွားပါတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့ ကျွန်တော့်မှာ သက်ပျင်းချရင်း ရင်အေးရပါတယ်။
ကိုလတ်က မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးတယ်။ မနက်ခင်း ၃နာရီက သူပြန်သွားတော့ အဆင်ပြေလား? ဘာပြဿနာတွေဖြစ်သေးလဲ? စသဖြင့်ပေါ့။ သူကျွန်တော့်မျက်နှာကို ပြုံးကြည့်ရင်း ပြောနေတာဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ အဝေးကိုအကြည့်လွှဲရင်း ရှက်စိတ်မွှန်ထူသွား ရတာပါ။
စနေနေ့ကတော့ တကယ့်ရက်ကြီးပါပဲ။ ညနေခင်း ၄နာရီမှာ လူစုပြီးနည်းနည်းသောက်ကြတယ်၊ အစာနည်းနည်းစားကြတယ်၊ သောက် ကြတယ်၊ ပြီးတော့ club ကိုသွားကာ ငှက်လေးတွေကို ရှာကြတယ်။
ကိုလတ်ကတော့ တကယ်ငြိမ်းတယ်။ အနေအထိုင်ရော အစားအသောက်ရောပေါ့။ လူတိုင်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေပြေငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း။ အခုလည်းကြည့်လေ ကျန်တဲ့သူတွေသောက်စားပြီး ပျော်ရွှင်တက်ကြွလွန်းနေတာကို သူက လူကြီးတစ်ယောက်ပုံစံအနေနဲ့ ထိန်းနေ တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သိပ်မသောက်နိုင်ပါဘူး သောက်လည်း မသောက်ချင်ဘူး။ ကျော်ကျော့်ကိုမြင်တိုင်း မနေ့ညက ရခဲ့တဲ့အခွင့် အရေးမျိုးပြန်လိုချင်နေမိတယ်။ ဒီတစ်ခါအဆင်ပြေအောင် ချောဆီကိုသွားဝယ်ထားပြီးပြီလေ ..အဟိ။ ကိုလတ်က အစားအသောက် မအိုကေဘူးလားမေးနေသေး ကျွန်တော်ပြုံးနေတာကိုကြည့်ပြီး။
ကလပ်မှာ ည ၁၁း၃၀အချိန်ရောက်တော့ အားလုံးတော်တော်ရေချိန်မှန်နေကြပါပြီ။ ဘော်ဒါတွေအားလုံးကိုယ်စီ အိမ်ပြန်ကြဖို့လုပ်တယ်။ ကျော်ကျော့်ကိုကြည့်လိုက်တော့ စကပ်တိုတို ရင်ဟိုက်ဟိုက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် အကြည်ဆိုက်စကားပြောနေကြတယ်။ သွား ပါပြီ ဒီညတော့ ကျော်ကျော် ကျွန်တော့်အိမ်ကိုလာနိုင်တော့မယ်မထင်။
သူ့ကိုလက်လွှတ်ရပြီးနောက် ကျွန်တော်အိမ်ကိုပဲပြန်လှည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အခန်းရှိရာဘက်ကို ချိုးကွေ့ပြီးလျှောက်လိုက်တော့ ဖြိုးဝေနှင့်မိုးဝေ အမြွှာနှစ်ယောက် အမူးလွန် အိမ်မပြန်ရဲတော့တာနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီလာဟန်တူတယ် တိုက်ခန်းလှေကားကိုတွဲပြီးတက် နေကြတာဗျ။ တစ်ယောက်က နည်းနည်းပိုမူးတဲ့တခြားတစ်ယောက်ကို တွဲလို့ပေါ့လေ။
'သေချာတာပေါ့ကွာ' မိုးဝေကိုကလေးတစ်ယောက်လို မချီလိုက်ကြကာလှေကားတွေကနေ ခပ်သွက်သွက်တက်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ထုံးစံ အတိုင်း အခန်းလွတ်က ခုတင်ပေါ်ချပေးလိုက်တာပေါ့။ ဖြိုးဝေလည်း သူ့ညီကိုအလိုက်သင့်အနေအထားပြင်ပြီးပြီး သူလည်းတစ်ဘက် ခုတင်ပေါ် ထိုးအိပ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ်ပြန်လာတာ ခပ်မြန်မြန်ရေချိုးသန့်စင်ရပါရော။ ခရေ၀ကို ချောဆီမဆွတ်ခင်၊ brief ဘောင်းဘီကို ချွတ်မပစ်ခင် သန့်ရှင်းနေဖို့လိုတယ်လေ သူတစ်ပါးရှေ့မှာ...ဟီး။
ရှေ့ခန်းကိုသွား တံခါးမကြီးကို သော့ခတ်၊ ပြီးနောက် သူတို့အခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ မနေ့ညက လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းပါပဲ သူတို့တစ်ကိုယ်လုံးကအ၀တ်တွေကို ချွတ်ပစ်လိုက်ကာ နှစ်ယောက်သားကို ဘေးချင်းယှဉ်လှဲထားပေးလိုက်တယ်။ သုံးညလောက် ရေချိန်မှန်ခဲ့ပြီး ဒီညလိုသိပ်မူးတဲ့ညမျိုးမှာ သူတို့ဖြစ်နေမယ့် အခြေအနေကို သတိရမိတာလည်းပါရဲ့။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကြားဝင်ပြီး ဒူးထောက်လိုက်ကာ ငပဲနှစ်ချောင်းလုံးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ ပွတ်သပ်ပြီး အထက်အောက်လှုပ်ရှားပေးလိုက်တာ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ လက်ထဲမှာတင် ထွားကြိုင်းလာရော။ ဖြိုးဝေရဲ့ ဒုတ်ကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ပွတ်သပ်စုပ်မျိုပြီး ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကိုတော့ မိုးဝေရဲ့ခပ်ဟဟနှုတ်ခမ်းထဲ ခွပြီးသွင်းဖို့ကြိုးစားဖြစ်တာပေါ့။ မိုးဝေခေါင်းကို နည်းနည်းရမ်းလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်ဆက်မလှုပ်ရှားတော့ပါဘူး။ straight သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲ -ီးတစ်ချောင်းထည့်သွင်းဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားတာ သူတို့သိသွားရင် ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲလို့ သေအောင်လန့်တာကြောင့်လည်းပါတယ်။
ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို lube များများ သုတ်လိမ်းပြီး မိုးဝေအပေါ်တက်ခွလိုက်ပါတယ်။ မာတောင်နေတဲ့ငပဲကို အသေအချာကိုင် အပေါက်ဝ မှာ သေချာတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးခြင်းထိုင်ချသွင်းလိုက်တာ အံ့အားသင့်ဖွယ်လွယ်ကူသွားပါရော။ အပေါ်ကြွလိုက် အောက်ကိုဖိလိုက်ကစား နေမိတာ အပျိုစင်ခရေ၀ကို မိုးဝေနှင့်ဖွင့်လိုက်ရခို့ ကျေနပ်ပါရဲ့။ အရင်က လက်ခလယ်ကို ချောဆီသုတ်ပြီး မကြာခဏတွင်းနှိုက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကြောင့် ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုလွယ်ကူတာနေမှာပါ။ ၅မိနစ်လောက် မိုးဝေပေါ်တက်ဆောင့်နေပြီးနောက် ဖြိုးဝေ အလှည့်ပေါ့လေ။ သူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံရတာ တကယ့်ကို ကြောက်လန့်ရင်ဖိုဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဖြိုးဝေပေါ်တက်ဆောင့်ရချိန်က သိပ် မကြာပါဘူး။ သူနည်းနည်းလှုပ်ရှားလာပြီး မူးပြီးရီဝေနေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေပွင့်လာကာ ထရပ်ပြီး တံခါးဆီကိုလှမ်းပါတော့တယ်။ ဒီကောင် အိပ်ပျော်ရင်း လမ်းထလျှောက်တတ်သူထင်ပါ့။ ကျွန်တော် သူ့ကိုမသိမသာ အိမ်သာဆီညွှန်ပြီး ထိန်းကိုင်လာကာ ကြွေကမုတ်လည်း ရောက်ရော ငပဲမာမာကိုထိန်းကိုင်ပြီး ဆီးသွားတာ အဆင်ပြေဖို့ ကူညီပေးဖြစ်တယ်။ ကြည့်နေရတာ ဘယ်လောက်ရင်ခုန်မိမှန်းမသိ တော့။ ဆီးသွားပြီးပြန်တော့ အိပ်ခန်းရှိရာ ပြန်လှည့်သွားပြီး သူ့ညီရဲ့ဘေးကိုတွားတက်ကာ လှဲအိပ်လိုက်ပါတယ်။ ခုတင်နှင့် မလှမ်း မကမ်းကနေ ကျွန်တော်မတ်တပ်ရပ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ သူ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတာ နောက်ဆုံးတော့ သူအသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်မှန်စွာဖြင့် အိပ်မောကျသွားပြန်ရော။ ကျွန်တော်လည်း အမြွှာနှစ်ယောက်ကြားထဲ ပြန်လျှောက်သွားလိုက်ကာ ဒူးထောက်ထိုင် လိုက်တာပေါ့။ပြီးတော့ မိုးဝေရဲ့ ငပဲကိုပြန်ပြီးလျှာတွေအာတွေနဲ့ရစ်ပတ်လိုက်တာ ခဏနေကအခြေအနေအတိုင်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပြန်မာလာပါရော။ ကွမ်းသီး ခေါင်းကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ရင်း အာခံတွင်းထဲ အဆုံးထည့်မျိုလိုက်တာ ထွက်ထာပြီထင့် ငံကျိကျိအရသာကို ရပါရဲ့။
အခန်းထဲမှာ အခြားသူရဲ့အသံရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်လန့်ပြီးထခုန်မိတဲ့အထိဖြစ်မိရပါတယ်။ အသံကြားရာ လှည့်ကြည့်ပြီးရှာလိုက်တော့ ကိုလတ်တစ်ယောက် အခန်းဝမှာ boxer ဘောင်းဘီတိုနှင့်တကွ ရပ်ပြီးကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါရော လေ။
'ကျွန်တော်.....ကျွန်တော် သူတို့ကို ခုတင်ပေါ်တင်ပေးနေတာပါ' စကားအဆက်အစပ်မရှိ ပြောမိပြောရာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
'အဟင်း....အခန်းထောင့်က တီဗီရှေ့ဆိုဖာပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေတာကြာလှပြီ။ လှုပ်ရှားသံတွေနဲ့ အသံတစ်ချို့ကြားရလို့နိုးလာတာကွ။ သူငယ်ချင်းကောင်းလေးတွေနှစ်ယောက်နှင့် မင်းလုပ်နေတာကို ငါတွေ့တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး....?'
အလန့်တကြားဖြစ်ပြီး စကားမဆက်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော် မျက်စိနဲ့တန်းနေတဲ့ သူ့ဘောင်းဘီစီအကြည့်ရောက်မိရတယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ သူ့ဘောင်းဘီဖောင်းကြွကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြင်ခဲ့တဲ့ သူစောင့်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းအပေါ် စိတ်ဝင်တစားရှိမှန်း သိသာလွန်းပါရဲ့။
'ဒါဆို ကိုလတ်လည်း သူတို့ကိုအိပ်ယာပေါ်မှာထားတာကူညီမယ်မဟုတ်လား?'
'မင်းကြိုက်ရင်တော့.....' ဂရုစိုက်စရာဆိုတာမျိုးကို စိတ်မ၀င်စားသော အကြည့်ဖြင့် တုန့်ပြန်စကားဆိုပါတယ် ကျွန်တော့်အမေးကို ကိုလတ်က။
ကိုလတ် သူ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်ပြီးလှမ်းလာလိုက်တာ ၆လက်မကျော်ရှည်ပြီး အနည်းငယ်တုတ်တဲ့ ငပဲဟာ ခေါင်းတရမ်းရမ်းနှင့် စိတ် လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်လိုက်ရပါရဲ့။ ဆီးစပ်က ခြုံပုတ်ကတော့ အတော်ထူပေမဲ့ သူ့အပေါ်ပိုင်းတစ်ကိုယ်လုံး အမွှေးအမျှင်သိပ်မရှိပေ။ ဒါပေမဲ့ ခြေသလုံးမွှေးတွေကတော့ မဲမှောင်လို့ပါ။ ကျွန်တော့်နံဘေးလမ်းလျှောက်လာကာ ဒူးထောက်လိုက်ပြီးနောက် ဖြိုးဝေရဲ့ငပဲကို ခပ်ဖွဖွဆွဲ ကိုင်လိုက်ရင်း သူ့ပါးစပ်ထဲသွင်းလိုက်ပါရော။ ဒီကိစ္စကိုလုပ်ဆောင်နေကြတာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံး ရူးမိုက်ပြီး အန္တရာယ်ရှိတယ် လို့ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ကိုလတ်ဘက်ကိုစောင်းကြည့်လိုက်တော့ သူဖြိုးဝေရဲ့ ငပဲကိုစုပ်မှုတ်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုပြန်ကြည့်ကာ မျက်စိမှိတ်ပြ ပါ့။ digital camera ကခုတင်ဘေးက စားပွဲမှာရှိနေပြီး အရာအားလုံး မှတ်တမ်းတင်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သတိရပေမဲ့ မသိသလို နေနေလိုက်တာ။ အမြွှာနှစ်ယောက်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို တစ်ယောက်ဟာကိုစုပ်လိုက် အခြားတစ်ယောက်ဟာကို ထုပေးလိုက်နှင့် ချိန်သား ကိုက်အဆင်ပြေနေကြပါတယ်။
ကိုလတ်က 'ငါ့ကောင်ဒီပစ္စည်းကတော့ ပြီးဖို့အသင့်ဖြစ်အောင် မာနေ....' သူ့စကားတောင်မဆုံးသေးပါဘူး ဖြိုးဝေရဲ့ငပဲကနေ သင်္ကြန် အမြှောက်လို ကိုလတ်မျက်နှာကို ဖျန်းပက်လိုက်ပါရော။ တပွက်ပွက်ထွက်နေတဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝက ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တွေကို သူ့ နှုတ်ခမ်းအစုံနှင့် ပွတ်သပ်နေသေးရဲ့။
သူသတိမထားမိလောက်ဘူး ထင်နေတာ ကျွန်တော့်ကင်မရာကို သူကောက်ကိုင်လိုက်ကာ မိုးဝေကို ကျွန်တော် စုပ်မှုတ်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကို zoom ချိန်ကာ အသေအချာဖမ်းတယ်။
၅မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ ကိုလတ်လိုပဲ အဖြစ်အပျက်ကို လက်ခံရရှိလိုက်ပါတယ်။ ကိုလတ် သဘောတကျပြုံးလိုက်ရင်း ကျွန်တော့် လက်ကိုသူ့ဆီဆွဲယူလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ပါးပြင်ကိုအနမ်းပေးပြီးနောက် cum တွေကိုလျှာနဲ့လျှက်တယ်လေ။
'ဒီအခန်းကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေသားတကျဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး မင်းအခန်းကိုသွားရအောင်'
ကျွန်တော်တို့ အမြွှာနှစ်ကောင် အ၀တ်အစားတွေကို ချိတ်ပြုပေး သူတို့ကိုစောင်ပါးတွေခြုံပေးကာ အခန်းကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်လိုက် ပါတယ်။ ပြီးနောက် ကျွန်တော့်အခန်းဆီ ကိုလတ်နှင့်အတူအမြန်ရွှေ့တာပေါ့။ အနမ်းမုန်တိုင်းထန်ကြား ခဏအကြာမှာတော့ ကျွန်တော့် မှာ ကိုလတ်ရဲ့ fuck တာကို ထိထိရောက်ရောက်ကို ခံယူရရှိတော့တာ။ doggy style ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို တုန်ခါစေပြီး ကျွန်တော့် ကျောပြင်တွေပေါ် ပူနွေးတဲ့အရည်တွေကို ဖြန်းပက်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကျွန်တော့်ငပဲကိုလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြုစုတာ မျက်ဖြူလန်လုနီးပါးပါ။
နှစ်ဦးသားအစွမ်းကုန်လှုပ်ရှားကြပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲလျောင်းလိုက်တာ ခဏနေတော့ ကိုလတ်က ကျွန်တော့်ကိုဝန်ခံပါတယ် သူ့အပြု အမူအချို့အပေါ်။ မနေ့ညက သူ ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းက မပြန်ခင် ကျော်ကျော်ရဲ့ ဒစ်ကိုမှုတ်ခဲ့သေးတယ်တဲ့။ ကျော်ကျော်အိပ်မောကျ နေသလိုဖြစ်ပေမယ့် semen နည်းနည်းပန်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့် သူအံ့သြခဲ့ပါသေးသတဲ့။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ ကျော်ကျော်နှင့် အမြဲကစား နေလားလို့ စိုးရိမ်နေတာ စတဲ့စကားတွေလည်းပါပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားတာ သုံးလကြာပြီးနောက် ကိုလတ်ရဲ့အခန်းကို ကျွန်တော်ပုံမှန် လို သွားအိပ်ဖြစ်သလို သူလည်း ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းစီ လာလာအိပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ပိုပိုပြီး နီးကပ် ရင်းနှီးလာသလိုပါပဲ။
လူတွေ တစ်နေရာ အတူဆုံကြတယ် စားကြသောက်ကြ လွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ကြတဲ့ အစဉ်အလာမှာ ကျော်ကျော် ကိုလတ်နှင့် ကျွန်တော်တို့သုံးယောက် လျှို့ဝှက်ပတ်သက်ခဲ့တာအပေါ် မဖြစ်ပျက်ခဲ့သယောင် ရိုးသားဆဲသူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် ကြိုးစား ခဲ့ကြပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေ ပုံမှန်အတိုင်း အသွားအလာမပျက် ကောင်မလေးတွေနှင့်အဆင်ပြေနေတာကို ၀မ်းသာပေးရင်း ကျွန်တော် တို့ ဆက်ဆံရေးက သာမန်ပဲဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့လေ။
ကိုလတ်နှင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ ရုတ်တရက်ရလာတဲ့အခွင့်အရေးအချိန်ခဏလေးမှာ အသုံးချရရှိခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေအား အတူကြည့်ရင်ခုန်နေကြဆဲပါ။ အခွေကို အချောသတ်တဲ့နေရာမှာ ကိုလတ်က expert ။
Alex Aung ( 26 Oct 2010)
သစ်တောတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ တောင်သေလာမြို့လေးကို ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့စတည်းချတာ တစ်ပတ်ပဲရှိသေးမယ် sketch ပုံတွေက အတော် များနေပြီ။ စိမ်းလန်းတဲ့ သစ်တောအုပ်ကြီးတွေက မြို့လေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ တော်တော်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှိနေတာဗျ။ ရတနာပုံ ရွှေမြို့ တော်ကနေ ကိုယ့်ဖာသာ ဂျစ်ကားလေးမောင်းလာ လမ်းတလျှောက် ဓာတ်ပုံရိုက်၊ စိတ်တိုင်းကျမြင်ကွင်းတွေ့ရင် ကင်းဗတ်စကို ထုတ် sketch ဆွဲပေါ့။
မြို့လေးက အတော်ဖော်ရွေသားပါပဲ။ ၅ရက်မှ တစ်ခါရှိတတ်တဲ့ ဈေးလေးတွေလည်း မြို့နေရာအတော်များများမှာ စည်ပင်သာယာ ဈေး ကြီးနှင့်အပြိုင် လတ်ဆတ်ဈေးနှုန်းချိုစွာတည်ရှိပါရဲ့။ မနက်ခင်းတိုင်း တည်းခိုရာအိမ်ကြီးရဲ့ လမ်းသွယ်ထိပ်က တို့ဟူးနွေးဆိုင်လေးမှာ ကျွန်တော်မရှက်နိုင် အရသာရှိရှိစားဖြစ်ပါတယ် ရှမ်းခေါက်ဆွဲမျိုးစုံကိုလေ။ မြို့သူမြို့သားလေးတွေက အရမ်းဖော်ရွေသလို လိမ္မော်ခြံ လိုမျိုး သစ်သီးခြံတွေဘေး ပန်းချီဆွဲနေတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို လုံးဝအနှောင့်အယှက်မပြု။
မြို့လေးရောက်တာ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်မြောက်တဲ့နေ့ ဒီနေ့တည်းခိုတဲ့အိမ် ဧည့်ခန်းကိုအ၀င် စားပွဲပေါ်က ကျွန်တော့်အမည်တပ်စာ ကို တွေ့မိတာကြောင့် ယူလာလိုက်ပါတယ်။ တည်းခိုရာလိပ်စာကို မပေးဘူး ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒါပေမဲ့....စာက.. ထူးထူးဆန်းဆန်း
'ကြိုဆိုပါတယ် ရွှေဧည့်သည်လေးရေ။ စာလက်ခံလိုက်ရလို့ မအံသြပါနဲ့။ မဟာမြိုင်တောစပ်က သစ်တော့ခြံနံဘေးမှာ ပန်းချီဆွဲနေတဲ့ ဆရာသမား လေးကို တွေ့မြင်လိုက်မိလို့ပါ။ မိတ်ဆက်စာရေးသည့်အနေနှင့်ရော အကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာ တောအုပ်အတွင်းက မဟာမြိုင် ဂေဟာကြီးကို အနုပညာလက်ရာဆန်းတွေကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာအဓိကပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် စာအောက်ခြေမှာဆွဲပြထားတဲ့ လမ်းညွှန် မြေပုံအတိုင်းကြွ ရောက်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
အနုပညာလက်ရာဆန်းတွေဆိုပါလား။ အနုပညာလက်ရာတွေဆိုရင် မြင်ရုံနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့ ကျွန်တော် မဟာမြိုင်တောအုပ်ရဲ့ မြေပုံကိုကြည့်လိုက်တော့ အတော်ကြီးမားတဲ့ တောအုပ်ကြီးဖြစ်မှန်း သိလိုက်ရတယ်။ ဒေါက်တာရဲ့ အိမ်ကြီးက သသစ်တောအုပ်ရဲ့ အလယ်မကျတကျ တောင်ကျစမ်းချောင်းတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာ။ အတော်သာယာမှာပဲ တွေးကြည့်တာနှင့်တင် ကျွန်တော်ရင်ခုန်တယ်။ ညရောက်တော့လည်း လမင်းကြီးကို နှင်းမှုန်တွေကြား ငေးရင်း နက်ဖြန်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် တောအုပ်ကြီးထဲကို။ စာတစ်စောင် ရဲ့ဖျားယောင်းမှုကို အလျှင်အမြန်လက်ခံလိုက်တာ မမှားတန်ကောင်းပါဘူးလေ။
သက်ပြင်းလေးချလိုက် စဉ်းစားလိုက် အနုပညာလက်ရာဆန်းကိုကြည့်ချင်စိတ်ကဖြစ်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော် ယူဆောင်သွားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယလေးတွေကို ပြင်ဆင်ပြီးမှ အိပ်မောကျဖြစ်ခဲ့ရ တယ်ဗျ။
ဒီကောင်လေးကို ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမမြင်ဖူးပါဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ငနာလေးပဲ။ ကန်စပ်က ကြာကန်ကို ပန်းချီဆွဲနေတာများ မလှမ်းမကမ်းက ရပ်ကြည့်နေတဲ့ လူကိုသတိမမူနိုင်ဘူး။
ပန်းချီဆွဲလို့မောတိုင်း ရေသောက်တိုင်း ပန်းချီပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းတိုင်း အမှတ်တမဲ့လှုပ်ရှား တတ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကောက်ကြောင်းတွေ က တော်တော်အချိုးအဆစ်ပြေပြစ်လိုက်တာ။ ငါသဘောကျတယ်။
ပန်းချီကိုပဲ အာရုံထားသလားမသိ သူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကားကိုတောင် သတိမမူမိဘူးထင်တယ်။ အင်းလေ.... ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို အမျိုးတူယောက်ျားတစ်ယောက်က လိုက်ရှိတ်နေမယ်လို့ဘယ်ထင်မိမလဲ။
ကဲ...ငါ့ပစ်ကွင်းထဲရောက်ဖို့ မင်းတည်ခိုရာအိမ်အရောက် ငါးစာ တစ်စောင် ပို့လိုက်တယ်။ မင်းလေး သဘောကျပါစေ..။
မနက်ခင်းစောစောစီးစီး ချမ်းချမ်းအေးအေးမှာ မြို့လေးရဲ့ အဓိကလမ်းမကြီးတလျှောက် ဂျစ်လေးကိုမောင်းနှင်လာရင်း မြေပုံထဲက ပြထား တဲ့အတိုင်း ဖုန်ထူတဲ့လမ်းသွယ်ဘက်ချိုးချလိုက်ကာ သစ်တောအတွင်းပိုင်းဘက်ကို မောင်းခဲ့လိုက်ပါတယ်။ မြို့လေးနှင့် မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိပြီး စိမ်းစိမ်းစိုစိုသာယာတဲ့ တောတန်းလေးကို မြင်ရပေမဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အသွားအလာမရှိခဲ့ပုံပေါက်နေပါရဲ့တိတ်ဆိတ်လို့။ ကားကဖွင့်ထားတဲ့ FM Radio က Rockသီချင်းခပ်ကြမ်းကြမ်းနှင့် အပြိုင် ကျွန်တော်ကတော့ မြူးကြွနေပါရဲ့။
လမ်းအတိုင်း ချိုးဝင်မောင်းချလာတဲ့ လမ်းထဲမောင်းဝင်လာတာ အတော်ကြာတဲ့အထိ ယာဉ်အသွားအလာမတွေ့ရဘူး။ လမ်းရဲ့တချို့ နေရာတွေမှာ သစ်ပင်ကြီးအချို့လဲကျနေတာ သစ်ခွဲသမားတွေ ဘာလုပ်နေလဲ ဒီလောက်ထင်းတွေအများကြီးရမယ့်ဟာကိုလို့ တွေးမိ ပါတယ်။ လက်က နာရီလက်တံကိုကြည့်လိုက်မိတော့ မိနစ်၂၀ရှိပြီဗျ အတော်နက်လာပြီထင့် သစ်တောအတွင်းကို။ ရေဒီယိုလိုင်းကလည်း သိပ်မမိချင်တော့တာကြောင့် ခဏပိတ်လိုက်ကာ ကားကိုစက်သပ်ရင်းလမ်းဘေးမှာ ရပ်လိုက်မိပါတယ်။
လေပြေတဖြူးဖြူးတိုက် သစ်ရွက်တွေကြားလေတိုးသံသဲ့သဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေရဲ့ အော်မြည်သံကြားရတာတွေက စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်း စေသား။တောပန်းမျိုးစုံက ဖြတ်သန်းလာတဲ့ လေနုအေးကလည်း မွှေးမြလန်းဆန်းစေပါတယ်။ ငေးကောင်းကောင်းနှင့် ကျွန်တော်ငြိမ်နေ မိတာ ရာသီဥတုက အေးလာပြီး အလင်းရောင်ဝေးလာတော့မှ ညနေစောင်းသွားပြီဆိုတာ သတိထားမိပါရဲ့။
ကားပေါ်ကိုခုန်တက် ကားနောက်ခန်းက ရေဘူးတစ်ဘူးဆွဲယူမော့ရင်း ကားအင်ဂျင်ကို စနှိုးလိုက်ပါတယ်။ တဖြေးဖြေး မြေပုံကိုကြည့်ပြီး မောင်းလာတာ အိမ်ကြီးနားလည်းရောက် အမှောင်ကလည်း ပိန်းပိတ်လို့။ ဘီးလှိမ့်ရုံ အသာဖော့မောင်းရင်း ခြံကြီးအတွင်း မောင်းဝင်သွား လိုက်တာ စဉ့်ဝင်အောက်အသာရပ်ရင်း အိမ်နှင့်ခြံအခြေအနေကို အကဲခတ်ကြည့်မိတော့ အတွင်းပိုင်းအခန်းတစ်ခုက မှန်အိမ်မီးရောင် ငယ်ကို မြင်ရပါရော။
ပြတင်းမှန်ကနေ တစ်ဆင့် ချောင်းကြည့်မိရင်း ဒီနေရာဟာ လူတစ်ယောက်တည်း နေဖို့ဆိုရင် အတော်ထူးဆန်းတဲ့ နေရာတစ်ခု အဖြစ် တွေးမိရပါတယ်။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှတဲ့ အခန်းတွေနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာလေဗျာ။ ဟူး....ဖုန်ထူတဲ့ လမ်းအတိုင်း မောင်းလာတာကြာတော့ ရေငတ်တယ်။ ဒီအချိန်ရေကြည် အေးအေးလေးသောက်ရရင်ကောင်းမှာ။ ရေသောက်ဖို့အရင် ရှာရမှာပါပဲလေ။
ကားအင်ဂျင်ကို စက်သပ်ပြီး သော့ကိုဆွဲနှုတ်ကာ အိတ်ကပ်ထဲထည့်ရင်း ကားပေါ်က အသာဆင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တံခါးမကြီးဆီ လျှောက်သွားလိုက်ကာ ကျွန်တော် ခေါက်လိုက်တာပေါ့။ အဆတ်မပြတ် ခေါက်လိုက် တစ်ချက်ခြင်းခေါက်လိုက်လုပ်နေတာ တုန့်ပြန်မှု အသံတစ်ခုမှ မကြားရပါဘူး။ တံခါးကို အသာတွန်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ အလိုက်သင့်ပွင့်သွားတာနှင့် ကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ ကြိုဆိုပုံကလည်း အေးစက်လိုက်တာနော်။
အထဲရောက်တော့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသလို ရှုပ်ပွမနေသလို ဖုန်ဆိုလို့ တစ်မှုန်တောင်မရှိပါဘူး။ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေဟာ သာမန် နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေလို သန့်ပြန့်နေပြီး ကြွေပြားကြမ်းခင်းများဟာ အစက်အပြောက် ကင်းကင်း။ အရာအားလုံးဟာ ဖြူစင်၊ သန့်ရှင်းတောက်ပနေတာများ ချီးကြူးဖို့တောင်ကောင်းရဲ့။ဧည့်ခန်း ဧရိယာက ကျဉ်းတယ်၊ ရေချိုးခန်း တစ်ခုနှင့် မီးဖိုခန်းတစ်ခု ၊ဒါပေမဲ့ အိပ်ခန်းမတွေ့ရဘူး။ အထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့ချိန်ကနေ အခုထိ သတိပြုမိရတာက အပေါ်ထပ်ကိုတက်သွားတဲ့ လှေကား...သတ္ထု ကြောင်လိမ်လှေကားပုံစံတစ်ခု။ နောက်ပြီး အခန်းထောင့်မှာ ကျောက်ဆစ်လှေကားကြီးက အောက်ဖက် အလင်းမဲ့နေတဲ့အထဲကို ခိုင်ခိုင် ခန့်ခန့်ကြီး ဆင်းသွားလေတယ်။ လှေကားထိပ်ကနေရပ်ပြီး အသံပြုကြည့်တော့ တုန့်ပြန်သံမကြားရတာ အကြိမ်ကြိမ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်ဆစ်လှေကားအတိုင်း ကျွန်တော် မြေအောက်ခန်းကျယ်ကြီး ရှိရာကို ဆင်းသွားလိုက်တာ အောက်လည်းရောက်ရော လင်းထိန် နေတဲ့ မီးနဲ့အတူ အခန်းအလယ်မှာ စားပွဲခုံတစ်လုံး၊ နောက်ဖက်နားမှာ အခန်းတံခါးတစ်ခုနှင့် အနီရောင် ဘုသီးလေးတစ်ခုက စားပွဲ ပေါ်မှာ။ ဒါပဲတွေ့ရတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ကျွန်တော် အသံပြုကြည့်တာ ဘာမှတုန့်ပြန်မှုမရတာနဲ့ အပေါ်လှေကားစီ မလှမ်းခင် စားပွဲ ပေါ်က ဘုသီးအနီလေးကို တစ်ချက်ကြည့်မိတယ်။ ဘေးနားမှာ print ထုတ်ပြီးကပ်ထားတဲ့ စာရွက်တစ်ခု။ 'ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ တစ်ခါတရံ ကျွန်ုပ်အချို့သောအခန်းထဲရောက်နေတတ်စဉ် သင့်ခေါ်သံကိုမကြားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်' အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ခလုပ်အနီ လေးကို နှိပ်ပစ်လိုက်တယ်။
အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ ဘာမှမဖြစ်လာပါဘူး။ အပေါ်ပြန်တက်ဖို့ လှေကားစီဦးတည်ပြီးကာမှ နံရံမှာရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော တံခါးချပ် က ဘေးတိုက်ပွင့်သွားတယ်ဗျ။ တစ်စုံတစ်ယောက်များ ပေါ်ထွက်လာမလား?
'Hello?' ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နှင့် အသံပြုကြည့်လိုက်တာပေါ့ တံခါးဝစီ။ 'Hello, ကောင်လေး ခဏလေးစောင့်ပါ အဲဒီနေရာမှာ။ ကိုယ်မင်းဆီကို အခုပဲလာခဲ့မယ်။ ဒီညနေကို ဧည့်သည်လာမယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားဘူးလေ' အသံက ပွင့်လာတဲ့ တံခါးအတွင်း ဘက်ကနေ ပေါ်လာသလိုပါပဲ။
စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ အသက်၄၀ ၀န်းကျင်လူတစ်ယောက် အဖြူရောင်ဓာတ်ခွဲခန်းကုတ်အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်လျက် တံခါးဝက ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ သူ့မျက်မှန်ကို ချိန်ညှိလိုက်ရင်း လက်တစ်ဖက်ဆန့်ကာ ကျွန်တော့်ကိုနှုတ်ဆက်ပါရဲ့။
'Dr. လွင်ဦးပါ ကောင်လေး။ မင်းနာမည်က ဘယ်သူများပါလိမ့်မလဲ?'
'ကျွန်တော့်နာမည် ဇာနည်ပါ။ ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲလာလိုက်မိသလိုဖြစ်လို့ ဆောရီးပါ။ ဆရာ့ကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးနော်'
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသားလက်ကို အားရပါးရဆုပ်ကိုင်လှုပ်ရမ်းရင်း ပြုံးပြဖြစ်ကြပါတယ်။ 'အလည်သက်သက်ပဲလား ? လေ့လာစူးစမ်းဖို့ ပါသလားကောင်လေး'
'ကျွန်တော် Four-wheel jeep လေးနဲ့ပဲမောင်းပြီးလာလိုက်တာ။ ဆရာ့စာလေးလည်း ရလို့ခင်ဗျာ့။ ပြီးတော့ အနုပညာလက်ရာ အသစ် အဆန်းတွေဆိုောတ့ စိတ်ဝင်စားတာလည်းပါတာပေါ့ ခင်ဗျာ'
'ဒီလမ်းလေးအတိုင်းလိုက်ခဲ့ ကိုယ့်နောက်ကို။ ဘာတွေအစွမ်းပြထားတယ်ဆိုတာ ပြပါ့မယ်'
သူလျှောက်လှမ်းသွားတဲ့ လမ်းအတိုင်း လိုက်သွားမိတာ ဒီလောက်ကျယ်တဲ့ မြေအောက်အခန်းကြီးရှိမှန်းအခုမှ သိရပါတယ်။ အခန်းကျယ် ကြီးတစ်ခုအတွင်း မရောက်ခင် ဒေါက်တာလွင်ဦးကမ်းပေးတဲ့ ရေဖန်ခွက်လေးကို အငမ်းမရသောက်လိုက်မှပဲ အမောပြောတော့တာ။ သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေအတိုင်း ထပ်တူဝင်သွားလိုက်တာ အခန်းထဲအရောက် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ ၀လုံးဖြစ်သွားပါရော။ အားလုံးအ ယောက် (၃၀)ကျော်ရှိတယ်။ အယောက် (၃၀)လုံးဟာ ကျွန်တော့်အသက်အရွယ် (၂၅)နှစ်ဝန်းကျင်။ ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆစ်က အချိုးကျနလွန်းစွာနှင့် အားလုံးသောသူများဟာ ပေါင်ကြားက အမြှောက်ထောင်လို့။ အချို့က ကြွက်သားတွေ အမြှောင်းမြှောင်းနှင့် အားကျစရာကောင်းသလို အချို့က အရမ်းကိုချောမောလွန်းကြပါတယ်။
အရုပ်တစ်ခုခြင်းစီ အံ့သြသဘောကျစွာလှည့်ပတ်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါက်တာက ပြုံးကြည့်နေတာများ သူ့လက်ရာတွေကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနေဟန်။
'ကဲ...ဘယ်လို ထင်မြင်ယူဆပါသလဲ ကောင်ကလေး?'
'ဒီလိုသက်ရှိလူတွေအလားထင်ရတဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေကို ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူးဆရာ။ ဘာကြောင့်များ ပြပွဲမလုပ်ရတာ လဲဗျ?'
'ကမ္ဘာကြီးက ကိုယ့်အနုပညာပုံစံအတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူးကွာ၊ ကိုယ်ကြောက်တယ်ကွ။ erection ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အ၀တ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံတွေကို ဘယ် museum တစ်ခုမှာများ ရှာတွေ့ခဲ့ဖူးလို့လဲ ကောင်လေး'
'ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေထဲမှာပဲ အဲဒါတွေကိုဖန်တီးရင်း ဖြတ်သန်းနေခဲ့တာကွ'
'ဗျာ? ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆရာ?' ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ပန်းချီကားတွေထဲ သူ့လို အချိုးအဆစ်ကောက်ကြောင်းတွေကို ပုံဖော်မိရင်း မေးမိလိုက်တယ်။
'ငယ်ငယ်ကတည်းက မိဘတွေရဲ့ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှာ အသားကျရင်း အိမ်မှာနေခဲ့ရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ တက္ကသိုလ်တက် တော့ ခန္ဓာဗေဒဆရာရဲ့ သင်ပြမှုအောက် နစ်မျောခဲ့တယ်။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ စကားပြောဖို့ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုမျှဝေဖို့ ဖီလင်ကိုမရှိခဲ့တာ။ ဟုတ်တယ် မင်းအသက်အရွယ်မှာပဲ ဒီလိုအမျိုးသားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကို စတင်သဘောကျခဲ့တာ ဆိုပါတော့'
ကျောက်ဆစ်ရုပ်များစီ လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့်ညွန်ပြရင်း သူ့ဘ၀ကောက်ကြောင်းတစ်ချို့ကိုလှစ်ဟပြတယ် အဖြေပေးပါရဲ့။
'ကိုယ့်လိုလူမျိုးက ထူးဆန်းနေလားမသိဘူး။ ကျောင်းမပြီးခင်မှာပဲ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ဖန်တီးတဲ့အတတ်ပညာကို တိတ်တခိုးသင်ခဲ့တယ် ထုဆစ်ခဲ့တယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ အစိတ်အပိုင်းလှလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်လာတယ်။ နောက်ပိုင်း ဘ၀တလျှောက်လုံး ဒီကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေကို ဖန်တီးလာခဲ့တာ။ အဲ....မင်းပေါင်ကြားက ဖောင်းကြွလာတာကိုကြည့်ရရင် ဒီအရုပ်တွေကို ကောင်းကောင်း စိတ်ဝင်စားနေပုံပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?'
'ဟို...အာ....အဲဒါ' ကျွန်တော်စကားတွေထစ်ကုန်ရပါပြီ။ ဘာပြန်ပြောရမယ်မသိ။ ဒေါက်တာဟာ လူတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကို ချက်ကျကျသိနိုင် လွန်းလှတယ်။
'ကျွန်တော် လိင်တူအမျိုးသားတွေနှင့် ဘာတစ်ခုမှ မပတ်သက်ခဲ့ဖူးဘူး အခုချိန်အထိ။ ဒါပေမဲ့ သေချာပါတယ် စိတ်ဝင်စားမှာ'
'ကောင်းပြီကောင်လေး အခုအချိန်မရှိတော့ဘူး မင်းအ၀တ်တွေဘာကြောင့်မချွတ်သေးတာလဲ အခန်းထဲမင်းတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ မယ်လေ။ ပြီးတော့ မင်းစိတ်ကြိုက်တာ လုပ်ချင်လုပ်'
'အဲဒါက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်....ကျွန်တော် မသေချာပါဘူး အဲဒီလိုခံစားဖို့'
'မင်းအနေနဲ့ ဘာကိုမှစိုးရိမ်ဖို့မလိုပါဘူးကွာ။ ကိုယ်ကတိပေးတယ် အနှောင့်အယှက် မပေးဖို့။ မင်းကိုလည်း လာမထိဘူး ဒါမှမဟုတ် မင်းအနားမှာလည်း မနေပါဘူး။ တခြားအခန်းကပဲ ကြည့်နေမှာပါကွ။ ကိုယ့်ကောင်လေးတွေနဲ့ မင်းပျော်ပျော်ပါးပါးအတွေ့အကြုံယူ တာကို ကြည်နူးချင်တာ။ မင်းအိုကေမယ်ဆိုရင် ကတိပေးပါတယ် ဒီနေရာမှာ တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ဖို့'
အဲလိုနဲ့ပဲ ဒေါက်တာလွင်ဦး အခန်းထဲက ခပ်သွက်သွက်ထွက်သွားကာ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ အခန်းထဲ ကျွန်တော်တစ်ယောက် တည်း ရုပ်တုတွေနှင့် ကျန်ခဲ့ရတာပေါ့။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ အခန်းထဲ လှည့်လည်ကြည့်ပြီးနောက် ဖောင်းကြွလာတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွား ကို ပွတ်သပ်ရင်း ချော့မော့လိုက်ရပါသေးတယ်။ ချောမောတဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ကောင်လေးတွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုကြည့် စိတ်လှုပ် ရှားရင်းပေါ့။ အတော်ထူးဆန်းတယ်။ ဒီကျောက်ဆစ်ရုပ် အတော်များများဟာ ကျွန်တော်တွေ့မြင်ဖူးတဲ့ မြို့ခံလူငယ်တော်တော်များများ ပါနေတူနေတယ်လို့ထင်တာပဲ။ မသေချာ မရေရာစွာဖြင့် ကျောက်ဆစ်ရုပ်တစ်ခုခြင်းစီလိုက်ကြည့်မိတာပေါ့လေ။ ပြီးတော့ ပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်ကြည့်မိပါတယ်။ ဒေါက်တာလွင်ဦး သစ်တောအုပ်အပြင်ရောက်တုန်း ဒါမှမဟုတ် ဒီကောင်လေးတွေ သစ်တောအုပ်ထဲဖြတ် သန်းတုန်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပုံရိပ်ယူကာ ချောမွေ့တဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေအဖြစ် ဖန်တီးထုလုပ်ထားတာနေမှာ။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေ ဖွင့်ဟဖို့ရယ် ဒေါက်တာကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေ ဖွင့်ဟပြဖို့ ကျွန်တော်ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေရဲ့ နံဘေး ကျောက်ဆစ်အောက်ခံတစ်ခုပေါ် တက်ရပ်ရင်း အ၀တ်ကကြယ်သီးတွေကို စတင်ဖြုတ်လိုက် ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေ လှစ်ဟပြသခြင်းကို မသိမသာနှစ်သက်မိနေစဉ်မှာ ကျွန်တော့်ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာ လုံးဝကိုမေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတဲ့ ရင်အုပ်၊ ကျစ်လစ်ပြီး အမြှောင်းထနေတဲ့ ဗိုက်ကြွက်သားတွေ၊ ဖုထစ်နေသော လက်မောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ။ အ၀တ်တွေ အကုန်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ် အမြန်။
ရင်တွေခုန်လိုက်တာများ အသက်မရှိတဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေဆိုပေမဲ့ ကြည့်နေရတာကိုက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ။ အယောက်၃၀ကျော်ရှိမဲ့လူ တွေကြားထဲ ခဏသွားလာကြည့်ရှုရင်း 'ပိုင်ပိုင်' ဟုတ်တယ် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်က တွေ့ဆုံရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ဘော်ဒါတစ်ယောက်နှင့်တူ လှတဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်နားရပ်လိုက်မိပါတယ်။ ပိုင်ပိုင်တို့အိမ်မှာ ရောင်းရန်ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားတာကြောင့် ကျွန်တော်စုံစမ်းရန်သွားရင်း သူနှင့်ဆုံမိခဲ့ခြင်းလေ။ အလွန်ပြုံးခဲရယ်ခဲပေမဲ့ သူရယ်မောလိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေးနှင့် နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်လေးပါပဲ။
ပိုင်ပိုင့်ကျောက်ရုပ်နား အသာရပ်နေရင်း ချောမွေ့တဲ့ ကျောက်သားဖြူဖြူပေါ်က ဗိုက်သားလေးတွေကို ကျွန်တော့်လက်ချောင်းလေး တွေနှင့် ပွတ်သပ်မိပါတယ်။ လက်ရာက မြောက်လိုက်တာ ဆီးစပ်က အမွှေးနုလေးတွေကတကယ့်အစစ်အတိုင်း။ ရင်အုပ်ပိုင်း နို့သီး ခေါင်းလေးတွေကို ကိုင်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ညီဘွားက အရမ်းကိုမာလာပါရော။ 'ပိုင်ပိုင့်' ညီဘွားစီအကြည့် ရောက်တော့ အားရမက်မောစရာ သူ့ပစ္စည်းက တုတ်ခိုင်ပြီးထောင်မတ်နေတာ အကြောကြီးတွေကိုထောင်လို့ပါပဲ။ အဲဒီအကြောကြီး တွေကို မရဲတရဲတို့ထိကြည့်မိရင်းက ကျွန်တော်လက်နဲ့အားရစွာဆုပ်ကိုင်မိပါတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းရာလေးတွေကရော အရည်ကြည်များ စို့နေရော့လား။ မနေနိုင်စွာဖြင့် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော် ပိုင့်ပိုင့်ပစ္စည်းကို ပါးစပ်ထဲသွင်းလိုက်မိပါပြီ။ အေးစက်စက်ကွမ်းသီး ခေါင်းကို ကျွန်တော့်လျှာဖျားနှင့် ရစ်ဝိုက်ဆွဲယူရင်း ပါးစပ်ထဲ တဖြေးဖြေးသွင်းလိုက်တယ်။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို အားရပါးရပြုစုနေရင်း လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်ညီဘွားကို ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်မိပါရော။ ပထမတော့ ကျွန်တော်သတိမပြုမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲမှာရှိတဲ့ ငပဲဟာနွေးထွေးမှုစတင်လာသလို၊ နုညံ့လာတယ်၊ အစစ်အမှန်အတိုင်းပေါ့။
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းထဲ တနေရာရာ ခလုပ်တစ်ခုနှိပ်သံသဲ့သဲ့ကို ကျွန်တော်ကြားရသလိုပါပဲ။ တပြိုင်နက်တည်းလိုလို ကျောက်ဆစ်ရုပ် ရဲ့ နွေးထွေးလာမှုကို သတိပြုမိရပါတယ်။ စိတ်အထင်ပဲနေမှာပါဆိုပြီး ကျွန်တော် ပိုင်ပိုင့်ရဲ့ငပဲကို ဆက်ပြီးပြုစုနေမိတာ ခဏကြာတော့ ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ကိုကြားရတယ်။ ဒေါက်တာများ နောက်ဖက်မှာလာရပ်နေသလား သို့မဟုတ် တစ်ခုခုများဖြစ်သလား? အခန်းထဲ လျှောက်ကြည့်တာ တစ်ယောက်မှမရှိတာကြောင့် ပိုင်ပိုင်ပစ္စည်းစီ နှုတ်ခမ်းသားတွေထိကပ်လိုက်ရင်း ဆက်လက်ပြုစုမိပါတယ်။ ငပဲကို လျှာတွေ နှုတ်ခမ်းတွေနှင့် ပြုစုရတာ အားရမိသလို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း climax ဖြစ်ချင်လာနေပြီဗျ။ ရုတ်တရက် တစ်ယောက် ယောက် ညည်းတွားသံကို နောက်တစ်ကြိမ်ကြားရပြန်တော့ ပိုင့်ပိုင့်မျက်နှာကိုမော့ကြည့်မိတာ သူကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို ထိန်းကိုင်လိုက်ရင်း ဒီတစ်ခါ သူ့ကိစ္စပြီးမြောက်ရေး ဆက်ကြိုးစားပါရောလေ။
အလန့်တကြား....ကျွန်တော်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ငပဲကိုတော့ အလန့်တကြားထွေးထုတ်ပစ်မိပါပြီ။ ပိုင်ပိုင်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ငုံ့ကြည့်ပြုံးပြရင်း ဆက်လုပ်ဖို့ပြောတာ။ 'ဇာနည် မင်းအဲဒီလို ငါ့ကိုဆက်လုပ်ပေးပါလား ငါကြိုက်လို့ပါ'
ကျွန်တော် ကျောထဲက စိမ့်ကနဲဖြစ်သွားအောင် လန့်သွားခဲ့မိတာပါ။ ချောမွေ့၊ အေးစက်နေသော ကျောက်ဆစ်သားကနေ နွေးထွေး လာရင်း လူသားအစစ်မြင်လိုက်ရတော့ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ် ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ထိန်း လိုက်ရတာပေါ့။ ပြီးမှ ပိုင်ပိုင့်ငပဲခပ်ထွားထွားကို အားရပါးရ လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ကာ ကွမ်းသီးခေါင်းကနေ အောက်ခြေအထိသွင်းလိုက် တယ်။ အခုတော့ လျှာဖျားလေးနှင့် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝကို ရစ်လိုက် တပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်၊ ပြီးတော့ တဆတ်ဆတ်ခုန်နေတဲ့ သွေး ကြောမကြီးတွေကို လျှာဖျားနှင့် တို့ထိအရသာခံမိပါရဲ့။
ပိုင်ပိုင် အနည်းငယ်ညည်းတွားနေရင်း သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူမတ်တပ်ရပ်နေခဲ့တဲ့ ကျောက်ဆစ်ခုံ ပေါ်ကနေ ဆင်းကာ အေးစက်စက်ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို လှဲချလိုက်တာပေါ့။ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း သူလိုလုပ်ဖို့ ခြေဟန် လက်ဟန်ပြတာကြောင့် ကြမ်းပြင်ထက်ကို အနေအထားအတိုင်းလှဲချလိုက်တယ်လေ။ ရင်ခုန်စဖွယ် တစ်ယောက်ဒစ်ကိုတစ်ယောက် စုပ်မှုတ်ကြပေါ့။ ခဏတာသော အချိန်များဖြတ်သန်းပြီးနောက် ပါးစပ်အသီးသီးထဲကို ပျစ်ချွဲတဲ့ အရည်တွေ ပန်းထည့်မိကြရော။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ပြီး အရသာခံကြရင်း ရုတ်တရက်ရယ်မောလိုက်မိကြတာကြောင့် ရောင်ရမ်းပြီး မျိုချမိကြပါတယ် ငန်ကျိကျိအရည်တွေကို ကိုယ်စီ။
မောလျစွာ လှဲလျောင်းနေတဲ့ ပိုင်ပိုင့် နှုတ်ခမ်းနုနုတွေကို တက်မက်မွတ်သိပ်စွာ ကျွန်တော်နမ်းမိပါတယ်။ ပြီးတော့ ချောမွေ့စိုပြေပြီး အမွှေးအမျှင်နည်းလှတဲ့ ပိုင့်ပိုင့်တစ်ကိုယ်လုံးကို နှစ်ခြိုက်စွာ နမ်းတယ်၊ လျှာနဲ့ကစားတယ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခြင်းစီရော။ ပြီးတော့ ခပ် မာမာလေးဖြစ်နေဆဲ နို့သီးခေါင်းလေးကိုလျှာနှင့်ရစ်ဝိုက်ပြီး ကလိတယ်၊ မနာကျင်အောင် ခပ်ဖွဖွကိုက်တယ်ပေါ့။ ရင်အုပ်နှစ်ခုကြားက အမွှေးနုနုလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် ပွတ်သပ်ရင်း အောက်ဆင်းလာကာ ချက်ပေါက်ကလေးကိုကလိ ပူနွေးနေဆဲ သူ့ငပဲကိုပိုမို သန့်ရှင်းအောင် ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ပေးမိတော့တာ။ သန့်ရှင်းကြည်လင်နေတဲ့ ပိုင်ပိုင့်ပေါင်တံတွေတလျှောက် ခပ်ဖွဖွနမ်းကြည့်မိပါ တယ်။ လုံးဝန်းပြီး အရွယ်ညီတဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေကို တစ်ခုခြင်းငုံစုပ်နေမိတာ ရင်ခုန်ဖို့တော့အကောင်းသား။ ကျွန်တော့်ဆံနွယ် တွေကို ပွတ်သပ်လာတဲ့ သူ့လက်အစုံကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်ကာ နောက်ခြေတစ်ဖက်စီ အနမ်းကြောကိုရွှေ့။
အင်း...အခန်းကြမ်းပြင်ထက်မှာ ကစားပွဲနွှဲနေတဲ့ ဇာနည် 'ပိုင်ပိုင်'ဆိုတာ သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့မှန်းသိသလားမသိသလား ကြည့်နေတဲ့ လူတောင် ရင်ခုန်လာရတယ်။
ကောင်းတယ် ဒီကောင်ကလေးနှစ်ယောက်တည်းကစားရတာပျင်းလှတော့မယ်။ နောက်ထပ် အဖော်တွေကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေဦးမှ
ကျောက်သားအဖြစ်အေးစက်နေရာကနေ သွေးပူနွေးတဲ့ လူသတ္တ၀ါဖြစ်လာကြတော့လည်း မြိုင်ဆိုင်နေလိုက်ကြတာများ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ကိုယ်စီကိုယ်စီ အတွဲတွေအဖြစ်။
'ငါ့ကို တောသားဆိုတဲ့ပုံစံနှင့် ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ ကောင်တွေပုံစံအတိုင်းအသက်အရွယ်တူတဲ့သူတို့တွေကို စိတ်တိုင်းကျစေခိုင်းနိုင်ပြီ လေ... အခုတော့.....ဟား ဟား'
ဘာသံပါလိမ့် နောက်တစ်ခါကြားရပြန်တာ။ ဟော..ခပ်လှမ်းလှမ်း နောက်နားမကျတကျက ဆံနွယ်ခွေကောက်ကောက်နှင့် အသက်၃၀ ရွယ်လူငယ်တစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ချစ်ရည်လူးနေရာစီ လှမ်းလာပါရောလား။ ဘယ်အချိန်က သူသည်လည်း အသက်ဝင်လာမှန်း ကျွန်တော်မသိ။ သူဆင်းလာရာ ကျောက်ခုံက နာမည်ကိုဖတ်ကြည့်တော့ 'သက်ပိုင်'တဲ့။ သူ ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာပြီးနောက် ရှည်လျား ပြီး သိပ်မတုတ်တဲ့ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ရဲ့ အပျိုစင်ခရေ၀ကို တဖြည်းဖြည်းသွင်း။ ကျွန်တော်ဘာကြောင့်များ မရုန်းကန်မိပါလိမ့် ကိုသက် ရဲ့ အထုတ်အသွင်းဆောင့်ချက်ငြင်ငြင်သာသာအပေါ်။ 'အား...အ...အ' ခံစားရတဲ့ဖီလင်က နာကျင်မှုနှင့် ရောနှောနေတဲ့ သာယာမှုတစ် ခုပါပဲလား။
ဘေးတစ်စောင်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့နား ၁၇ ၁၈နှစ်အရွယ်ကောင်လေး' ဖြိုးဝေ'ရောက်လာကာ တုတ်တုတ်နှင့် သိပ်မရှည်တဲ့ သူ့ငပဲခပ်မာမာကို ကျွန်တော်စုပ်ဖို့ နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲ ထိုးထည့်ပေးပါရော။ ဖြိုးဝေလေးဟာ အရင်က အစုပ်အမှုတ်ခံဖူးတာ ၀ါရင့်နေ ဟန်တူပါရဲ့။ မလုပ်တတ်သေးသူကို ကောင်းကောင်းခိုင်းတတ်တယ်။
ကျွန်တော်နှင့် ဖြိုးဝေ၊သက်ပိုင်တို့ ချစ်ကြည်နူးနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေ အားလုံး မနေနိုင်ကြတော့ဘူးထင်ပါ တယ်။ အချို့က ကျောက်ဆစ်သားအဖြစ် လအနည်းငယ်၊ အချို့က နှစ်အနည်းငယ်သက်တမ်းကြာခဲ့ကြပြီဆိုပဲ။ ၃၂ယောက်သော လူ ယောက်ျားအားလုံး ကြမ်းပြင်ကျောက်သားအပေါ် စုပ်တဲ့သူ၊လုပ်တဲ့သူ၊ တက်မက်စွာနမ်းတဲ့သူတွေနှင့် မြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ မြင်ကွင်း ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ များမကြာခင်ပေါ်ထွန်းလာပါတော့တယ်လေ။
အရာအားလုံးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ တိမ်းညွှတ်မှုတွေအောက် ဖြစ်ပျက်နေကြပြီလား ကျွန်တော်မတွေးအားတော့။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျစ်လစ်လှပသော စွဲဆောင်မှုခပ်ပြင်းပြင်း အမျိုးသားတွေ တစ်နေရာတည်းစုဝေးပြီး အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်တည်း ဆော့ကစားနေကြ တာကိုမြင်ရရင် ဘယ်လိုများခံစားရမလဲလို့။
သူတို့တွေ အားလုံးအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ စီးမျောကြပြီး ခဏမှာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုထဲကော ကြမ်းပြင်ပေါ်ရော သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မကျန် ဖြူပစ်ပစ်အရည်တွေ ၀ဲပျံကုန်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်သည်လည်း အားရပါးရ အမည်မသိ ကောင်ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကျွန်တော်....ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မှန်းမသိ အခုမှ ၀မ်းနည်းလာမိတယ်။ ချစ်သူခင်သူ ချစ်ခဲ့မိတဲ့ ရွှေမြို့တော်က ကိုကြီးကို တော့ မပေးအပ်ခဲ့မိဘဲ ဒီစံအိမ်ကြီးရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအောက်လိုက်ပါသွားရင်း မရင်းနှီးတဲ့ လူကို အပျိုစင်ခရေ၀ကိုပေးခဲ့ရတယ်။
'ကောင်လေးအဆင်ပြေရဲ့လား? ကိုယ်မင်းကို မကြာခင်ရှင်းပြပါ့မယ် အရာအားလုံးကိုပေါ့'
ဘေးဘီကို ကြည့်မိတော့ ခန်းမထဲဝယ် ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေက နေသားတကျ။ ဒေါက်တာလွင်ဦးရဲ့ ဖြေသိမ့်မှုများကြောင့် အလကား မျက်ရည်ကျမိတဲ့ ကျွန်တော် မျက်ရည်ကို သုတ်ရင်း ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားရတာပေါ့။ ပိုင်ပိုင်၊ ဖြိုးဝေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ? ခဏနေက ကျွန်တော်နှင့်အတူ ခန်းလုံးပြည့်ခဲ့သောလူသားတွေကရော မျက်စိတစ်မှိတ်လေးမှာကို..ဘယ်ရောက်?
'ဒါဆို....ဘယ်ဟာက တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ရမလဲဆရာ?'
'ဟုတ်ပါပြီ...မင်းလေးကို ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေအသက်ဝင်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပြောပြပါ့မယ်။ အခုတော့ မင်းညစ်ပတ်နေလို့ ရေချိုးလိုက်'
ကျွန်တော်ဘာပြောနိုင်မှာလဲလေ ခဏနေကတော့ စိတ်ကူးလား အိပ်မက်လားမသိခဲ့တဲ့ ကစားပွဲမှာ ချွေးသံတရွှဲရွှဲဝင်နွှဲခဲ့ရင်း အခု တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ချွေးတွေ မျက်ရည်နှင့် ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တွေ စုပုံပေကျံနေတော့ ခေါင်းကိုအသာငြိမ့်ပြရင်း ဒေါက်တာလွင်ဦးပြောသလို ရေချိုးသန့်စင်ရုံမှတပါး ကောင်းတာမရှိ။ အခန်းထောင့်မှာရှိတဲ့ ရေချိုးခန်းလို့ယူဆရတဲ့အခန်းကိုညွှန်ပြတော့ အခန်းထဲမှာ ရေချိုးshower ပိုက် လည်းမရှိ၊ ရေစည်ရေကန်များလည်းမရှိ ကျွန်တော်ရှာဖွေနေတုန်း ဒေါက်တာ အခန်းထောင့်က ခလုပ်အချို့ကိုနှိပ်လိုက်သံ ကြားရပြီး နောက် ကြမ်းပြင်ကနေ ရေပန်းတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ပန်းထွက်လာတော့တယ်။ ၀မ်းသာအားရ ခန္ဓာကိုယ်မှာပေကျံနေတာတွေ ဆေး ကျောပစ်ရင်း စိတ်ထဲကျေနပ်သွားရတယ်။
'ဘာ....ဘာဖြစ်တာလဲ?' ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေဟာ ပိုပိုကျစ်လစ်လာတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာပါရော့လား။ ရေချိုး ဖို့ပန်းထုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ရေပန်းတွေကနေ ကျွန်တော်ပြေးထွက်ဖို့ ဟန်ပြင်လိုက်တယ် အား...ရွေ့မရတော့ဘူး။ ခြေဆစ်တွေကနေ ပေါင်တံတွေက တဆင့် ကျောက်သားတွေဖြစ်ကုန်ပြီပဲ။ 'ဒေါက်တာ...ဒေါက်တာ' အော်သံတွေမဆုံးသေးခင် ကျွန်တော်အသံထွက် မရတော့ဘူး။
'သေချင်တဲ့ကျားတောပြောင်းတဲ့' .....အနုပညာလက်ရာဆန်းကြောင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အနုပညာလက်ရာဆန်းတစ်ခု........အ...။
တော်တော်ရယ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်.... ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပြတိုက်ထဲမှာ လက်ရာအတော်မြောက်တဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်တစ်ခုတိုးပြီပေါ့။
အခုကြည့်စမ်း...ရေချိုးခန်းလို့အမည်တပ်တဲ့ ငါ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ခေါမကျောက်ရုပ်တွေထက်သာတဲ့ အချိုးကျကျောက်ဆစ်ရုပ်ကို သူ့အရင်ရောက်နှင့်တဲ့ အပေါင်းအဖော်တွေကြား ထားရဦးမယ်။ ရင်အုပ်ကြွက်သားတွေက မောက်နေတာပဲ။ တင်ပါးလေးတွေက ချောမွတ်လို့။ ပေါင်ကြားက ငပဲကလည်း မမာ့တမာ။
သူတို့တွေအားလုံး ငါပိုင်ဆိုင်ရာ သစ်တောထဲမှာ ပျောက်ဆုံးစာရင်းဝင်လာတဲ့လူတွေပေါ့။ သူတို့ကို ဘယ်သူမှမရှာနိုင်ပါဘူးလေ။
ငါပျော်ချင် လိင်စိတ်ခံစားချင်ရင် ခလုပ်လေးတွေနှိပ်လိုက်ရုံနှင့် သူတို့တွေ ဖျော်ဖြေမှုပေးသားပေါ့။ ခဏနေကပဲကြည့် 'ဇာနည်'ဆိုတဲ့ ပန်းချီဆရာလေးလာတာကို သူတို့ပါဝင်ဖျော်ဖြေကြတာပဲမဟုတ်လား။
'ကဲ...ကဲ မင်းတို့နေခဲ့ကြတော့ မီးတွေပိတ်ခဲ့ပြီ ဟုတ်လား'
မနက်ခင်းအာရုဏ်တက်လို့ ကျေးငှက်တွေတောတန်းတလျှောက် အိပ်တန်းထကုန်ပြီ။ မနက်စာစားဖို့ပြင်ဦးမှပါ။
ကားတစ်စီးခြံဝင်းနားမှာ ပျက်သွားတယ်ထင်ရဲ့။ နောက်ထပ်ဧည့်သည်တစ်ယောက်လာပြီပေါ့။ သူ့ကိုလည်း အနုပညာလက်ရာဆန်း လေးတွေ အခန့်သင့်ရင်ပြဦးမှပါ... အနုစိတ်တဲ့ အနုပညာလက်ရာဆန်းတွေလေ။
Alex aung ( 21 Oct 2010)
Posted by Alex Aung at 10:50 AM No comments:
ကျွန်တော့်နာမည်က 'ပိုင်စိုးဝေ'ဖြစ်ပါတယ်။ 'ပိုင်ပိုင်'လို့လည်း သူငယ်ချင်းတွေက ခေါ်တတ်ကြတယ်။ ဒီ Big Apple မှာတော့ လူမျိုးခြား သူငယ်ချင်းတွေက Andy လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာ ဆယ်တန်းလောက်အထိ ကျောင်းတက်ပြီးမှ ဒယ်ဒီတို့ရှိရာ ဒီတိုင်းပြည်ကို Hotel Management ဘာသာရပ်ဖြင့် အထူးပြုဘွဲ့ယူဖို့လိုက်လာခဲ့ခြင်း။ ဘာကြောင့်ဆို မြန်မာပြည်မှာ ဘိုးဘိုးတို့ မိသားစုလုပ်ငန်းကို ဦးစီးဖို့ရယ် ဟိုတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝါသနာပါတာရယ်ကြောင့်လေ။
အသွင်အပြင်ကို သိချင်ရင်တော့ပြောပြပါ့မယ်။ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေက ဘီလူးကြီးတဲ့။ ဒီမှာတော့ အတော်အသင့်ကြံ့ခိုင်သူ စာရင်းဝင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထွားကြိုင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ Gym ကိုအနည်းဆုံး နှစ်ခေါက်လောက်ရောက်ရမှ စားဝင်အိပ်ပျော်ပါရဲ့။ မျက်နှာက နုနု ခန္ဓာကိုယ်က ထွားထွားဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို ရည်ညွှန်းတဲ့ စကားလုံးက ဘာပါလိမ့် ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူး။
တစ်နေ့တော့ ကျောင်းက Art class တွေမှာ မော်ဒယ်လ်လုပ်ပေးဖို့ ရဲရင့်စွာ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ nude model အဖြစ်လေ။ လူ တွေကြားထဲ ထင်ပေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောချင်နေတာလား? ကျောင်းက ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ကပ္ပတိန်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အမျိုး သမီးတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ ရေပန်းစားပြီးသားဆိုတော့ထပ်ပြီး လှုပ်ရှားဖို့ မလိုအပ်ဘူးထင်ပါရဲ့။အ၀တ်မပါ ကိုယ်ဟန်ပြခြင်းဟာ ဦးနှောက်သုံးဖို့မလိုဘူး၊ ခေါင်းစားဖို့အကြောင်းအရာမရှိ။ သေချာတာက ကျောင်းတက်တာ ငွေအတော်ကုန်တာလေ။ အိမ်ကိုလည်း ပြန်မတောင်းချင် အချိန်ပိုင်းပြင်ပအလုပ်ကျတော့လည်း မလုပ်ချင်သေးတာပါပါရဲ့။ ဒါကြောင့်ကျောင်းချိန်တွေရဲ့ တစ်ချို့သောကာလလေး တွေမှာ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းပါ။
ဆိုရရင်တော့ ပထမဆုံး class တစ်ခုမှာ ကိုယ်ဟန်ပြခြင်းအတွက် ဘာပြဿနာမှ မပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ jock-strap လေးတစ်ထည်ဝတ်ပြီး တစ် ယောက်မှ ကျွန်တော်မသိတဲ့ ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။ သူတို့အားလုံး အနုပညာကြမ်းပိုးရုပ်တွေ...အဲ...ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကို သဘော ပေါက်ရဲ့လားမသိ။ အတန်းထဲက ဘယ်ကောင်မလေးကမှ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားကပစ္စည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မကြည့်ကြပါဘူး။ ဟီး... .အဲဒါကြောင့် ရုတ်တရက် အခန့်မသင့်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်မလား စိုးရိမ်နေဖို့ မလိုခဲ့ဘူးလေ။
အတန်းချိန်တစ်ချိန် ကိုယ်ဟန်ပြပြီးနောက် ပန်းချီနည်းပြဆရာမ ခေါ်သလိုပြောရရင် ကျွန်တော့် 'cover up' ကိုအသင့်ပြောင်းပြီးသွားပြီ။ အားလပ်ချိန်ခဏလေးပေးလို့ ကျွန်တော်ခုံတစ်ခုမှာ အသာထိုင်နေတုန်း အရပ်ရှည်ရှည် အညိုရောင်ဆံနွယ်တွေနှင့် နှစ်လိုဖွယ် ဘဲတစ် ပွေ အခန်းထဲလှမ်းလာတယ်။ ဒီကောင့်ကို campus ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ကောင်ပဲ။
'ငါက Straight တစ်ယောက်လေ....shit!'
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထပ်ထပ်ပြန်သတိပေးရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ကောင်မလေးတွေစိတ်ထဲ အမြဲရှိ နေတတ်တဲ့ အချိုးကျရုပ်ပုံငယ်လေးအတိုင်း အစစ်အမှန်ပါပဲ။ 'အရပ်ရှည် ဘော်ဒီမိုက် ရုပ်ခပ်ချောချော' ဆိုတာမျိုးလေဆို တာမျိုးလေ။ သူ့ဆံနွယ်တွေက လုံးဝအညိုရောင်အရင့် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ဝေ့၀ဲကျနေတာ။ ၀တ်စားထားတာက ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ဒီဇိုင်း။ မျက်ဝန်းတွေက ခပ် ညို့ညို့ရယ်။ အပြုံးတွေက အရသာရှိပါ့ စားသုံးရတာ။ သူ့ပခုံးတွေက ခပ်ကျယ်ကျယ်။ နောက်ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင် ပြန့်ကားနေရော။ တီရှပ်ဝတ်ထားတဲ့အတွက် သူ့တွေကလည်း ထင်ရှားလှပေါ့။ အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ သူ့ခြေလှမ်းတွေနှင့်အတူ 'သူသည်လည်း အားကစား သမားတစ်ယောက်ပဲ' လို့ အတွေးဝင်မိရသလို 'ဒီဘော်ဒီမျိုးရဖို့ Gym ကိုအတော်သွားထားတဲ့ပုံပါလား' ဆိုပြီးသဘောကျရတယ်လေ။ သူ့ကိုကြည့်နေရင်း ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားက မာလာတော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလုပ်နေရတယ်ဆိုတာ သတိပြန်ကြပ်မိပြီး စိတ် ထိန်းဖြစ်ရပါတယ်။
'Ok everyone' နည်းပြဆရာမရဲ့ အသံပေါ်ထွက်လာမှုက ကျွန်တော့်ကို ထိတ်လန့်မှုဖြစ်စေပါရဲ့။ ပေါင်ကြားက ညီဘွား အရမ်းမာတောင် နေချိန်ကိုး။ 'စဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား Andy?' သူမရဲ့ အတန်းချိန်တစ်ခုကို ကျွန်တော် ဒီနေ့လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးနေမိဆဲမှာပဲ သူမကအဆင့်ဖြစ်ပြီ လားတဲ့။
ပိုပိုပြီး အထိတ်တလန့်ဖြစ်မိရတယ်။ ကျွန်တော်ဘာများလုပ်မိနေခဲ့ပြီလဲ? art class ထဲမှာ ထိုင်မရထမရဖြစ်နေသော ကျွန်တော် ရယ်လေ။
'Uhh,' ကျွန်တော်ပြောဖို့စကားတွေ ထစ်ကုန်ရပါပြီ။ 'ကျွန်တော်စကားခဏပြောလို့ရမလား? အရင်ဆုံးပေါ့'
'I'm sorry, အတန်းမစခင်ပြောရမှာ ဆရာမကို၊ ဒါပေမဲ့ ဆရာမဆီစောစောလာတွေ့ခွင့်မရခဲ့လို့' အ၀တ်တဘက်လေးတစ်ခုရှိလို့တော် သေးတယ်။ အဲဒါလေး ခါးကိုပတ်ပြီးထိုင်ခုံကနေထလိုက်ကာ သင်တန်းနည်းပြထိုင်နေတဲ့ ခုံဆီသွားလိုက်တာ ခုံစွန်းအမြင့်လေးက ခါး အောက်ပိုင်းကို ကာထားလို့တော်သေးရဲ့။
'Oh sure Andy. သင်တန်းသားတွေ ခဲတံချွန်နေတုန်းပါ။ ဒီနေ့ကောက်ကြောင်းဆွဲကြရုံသက်သက်။ မင်းအဆင်ပြေရင်တော့ တစ်ခါ တည်း အချောသတ်မှာလေ။ မနက်ဖြန်တော့ charcoal သုံးပြီး မင်းဘော်ဒီပုံရိပ်မျိုးစုံကိုဆွဲကြမယ်ပေါ့။ ခဏနားပြီးရင်တော့ မင်းကူညီ နိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ'
သူမရဲ့ ပြောစကားများကြောင့် နည်းနည်းနေသာထိုင်သာဖြစ်သွားတယ်။ သူမကျွန်တော် ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရင်...သိလိုနည်းပါး ဖြစ်သွားသလားမသိ။
ကျွန်တော် သူမရဲ့စားပွဲရှေ့က ခုံမှာထိုင်နေမြဲ။ သူမကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကာ ထိုင်နေရာဆီလှမ်းလာရင်း စကားစမြည်ပြောပါရဲ့။ 'အားလုံးအိုကေတယ်မဟုတ်လား? မနေ့တုန်းက မင်းအားလုံးအဆင်ပြေပြေပြီးသွားခဲ့တာပဲ။ ငါမင်းစိတ်အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခုမဖြစ်ဘူး လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ကွာ။ ငါသိပါတယ် ကျောင်းသူတွေရဲ့ရှေ့မှာ nude ပို့စ်အနေနဲ့ နေရတဲ့အခက်အခဲကို။ မင်းအဲဒီလိုနေဖို့ အိုကေ သေးတယ်ဟုတ်?'
'Thanks God!' နောက်ဆုံးတော့လည်း ပေါင်ကြားက ထောင်ထနေတဲ့ ညီဘွားက ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီလေ။ မြင်လိုက်ရတဲ့ ဘဲက နည်းပြနဲ့ စကားနည်းနည်း ပြောပြီး ဘယ်ပျောက်သွားတယ်မသိ ကျွန်တော့်မြင်ကွင်းမှာ ကြာရှည်မရှိတော့တာ ကံကောင်းတယ်။ ဒီလူဘယ်သူ ပါလိမ့်? ကျွန်တော် ကိုယ်ကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်မိတာပေါ့နောက်တစ်ခါ။
'Uhh...no, I'm ok' ဘာစကားလုံးကို အလိမ္မာသုံးပြီးဖြေရှင်းရမလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန် တိုက်တွန်းရတယ် ခပ်မြန်မြန်။ 'ကျွန်တော် အတန်း ချိန်ဘယ်လောက် များများ ဒီလိုကိုယ်ဟန်ပြပေးဖို့ လိုဦးမလဲ မေးချင်နေတာဗျ။ အရင်တုန်းက ဘယ်သူမှ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ် အပိုင်းတွေကို အသေး စိတ်မှတ်တမ်းမတင်ဖူးဘူးလေ'
'Oh သေချာတာပေါ့' သူမကခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်လုပ်ပြရင်း ထောက်ခံစကားပြောတယ်။
'ကိုယ်တို့ မင်းကို6sessions လောက်အသုံးပြုကြမယ်။ အတန်းချိန်တစ်ခုပြီးတိုင်း မင်းအတွက် ၀န်ဆောင်ခကိုရမှာပါ။ အရင်အပတ်က ငါမေ့သွားတယ်။ မင်းခွင့်လွှတ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါရဲ့။ ဒီနေ့အတန်းချိန်ပြီးရင် မင်းကိုပေးဖို့ ချက်ခ်နှစ်ခုရှိပါတယ်ကွ'
ခေါင်းတွေငြိမ့် ကျွန်တော့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားတွေကြည့်ပြီး သူမပြုံးပါတယ်။ 'ဒါပဲမဟုတ်လား? အခု Ready ဖြစ်ပြီပေါ့?'
ကျွန်တော် ခေါင်းငြိမ့်ပြရင်း မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပန်းချီဆွဲခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ကာ ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တဘက်ကိုဖယ်ရှား လိုက်တော့တာပေါ့။ အဦးဆုံးနေ့တုန်းကလိုပဲ ရူပါသိပ်မလန်းတဲ့ စော်တစ်ချို့ဆီက တိုးတိုးတိတ်တိတ်ရယ်သံကိုကြားဖြစ်အောင် ကြားမိ သေး။ သူတို့ဘာတွေးထင်လည်း ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဟီး....အခု ကျွန်တော်ဂရုစိုက်နေတာက အညိုရောင်ဆံနွယ်ခွေတွေနှင့် ဘဲအကြောင်းတွေးပြီး ပေါင်ကြားက ညီဘွားခေါင်းထောင်မထလာရေးကိုပါပဲ။
အတန်းချိန်တွေ အတော်များများကို ရုတ်တရက် အခန့်မသင့်ဆိုတာတွေမဖြစ်ဘဲ သုံးလေးနာရီကောင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အတန်းချိန်တွေတစ်ခုပြီးတိုင်း အဆင်ပြေပြေဖြစ်ရခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရတာအမောပါ။ ဟိုဟိုသည်သည်လျှောက် တွေးနေပေမယ့် အညိုရောင်ဆံနွယ်တွေနှင့် အရှေ့တိုင်းသားရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်ဘဲကတော့ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ရိုင်းဝင်စေဆဲပါ။ ကျောင်းကို အသစ်ထပ်ရောက်တဲ့အုပ်စုထဲကပဲဖြစ်မှာပါ။ ပန်းချီနည်းပြစီလျှောက်လှမ်းသွားတဲ့ သူ့တင်ပါးနှင့် ပေါင်တံတွေဟာ အတော်လှပသား။ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့မြို့လေးမှာ တစ်ခါဖူးမျှမမြင်စဖူးသူ့ကို။
အတန်းရှေ့ကိုယ်ဟန်ပြ ထိုင်နေချိန် ထနေချိန်အတောအတွင်း သင်တန်းသားတွေကိုအကြည့်မစူးစဖူးဘူး။ လေအေးပေးစက်က လေ လှိုင်းတစ်ချက်အဝေ့မှာ အနောက်စွန်းစွန်းက အညိုရောင်ဆံနွယ်တွေကို ကင်းပတ်စတစ်ခုရဲ့ အနားသတ်အဖြစ်မြင်ရချိန်မှာ ကျွန်တော် အကြည့်ရွှေ့လိုက်တယ်။ သူ.....သူကျွန်တော့်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့....ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အတိ အကျ သပ်ရပ်စွာ မှတ်တမ်းတင်နေသပေါ့။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မျောလွင့်သွားတဲ့ ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းတွေးလိုက်တာနှင့် မြေပြင် ပေါ်ခြေထောက်တွေ ထိခတ်မိရတာ မိနစ်တိုင်း။ ကျွန်တော်သိချင်နေမိပြီ သူ့ကိုကြည့်လိုက်တိုင်း ဘယ်အရာက စိတ်လှုပ်ရှားနေစေသလဲ ကျွန်တော်.....ထားပါလေ ကျွန်တော်ဘာကိုတွေးနေတယ် ဘာကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းကနေ အခုထိ ပြောမပြခဲ့ဘူး။ ကိုယ်လိုချင်နေတဲ့အရာကို အရမ်းမျှော်လင့်ပြီးမှ မရခဲ့ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံကို ငယ်စဉ်ကရခဲ့ဖူးသည်မဟုတ်လား။ ပြီးတော့ အခုကျွန်တော့် စိတ်ထဲ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်မှုတွေကြုံနေရသလားလို့။ အတန်းချိန် တစ်ခုပြီးတိုင်း သူ့ဆီအကြည့်တွေရောက်မိတိုင်း ပိုပိုသေချာလာရပါတယ်။
ဘာပြဿနာမှ မဖြစ်ဘဲ အတန်းချိန် (၅) ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ အတန်းချိန် (၆)မှာတော့ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာရပြီ ကျွန်တော့်အတွက်။ ဘာကြောင့်ဆိုဒီအတန်းချိန်ဟာ နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနေတာကြောင့်ရော ပါမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခပ်တိုးတိုးလေးဖွင့် ထားတဲ့ piano တီးလုံးသံလေးကြောင့် စိတ်ထဲမှ တစ်ဆင့်အတန်းချိန်ကို အဆင်ပြေစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါရဲ့။
တစ်နာရီ အချိန်ပြည့်လို့ နာရီဝက်အဆုံးသတ်မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ သူတို့ခဲတံ၊ ခဲဖျက်၊ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို သိမ်းဆည်းစ ပြုကြပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ ပုံဆွဲစာရွက်များကို အိတ်ထဲအလိုက်သင့်တွဲချိတ်ထည့်ကြပါပြီ။ လူတိုင်း ဒါပေမဲ့ အညိုရောင်ဆံနွယ်တွေနှင့် လူကလွဲ ရင်လေ။ သူက ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ကြည့်ကာ အသေးစိတ်ခြယ်မှုန်းနေဆဲ ကျွန်တော်ရင်ခုန်စပြုလာတယ်။ သူနှင့် နှစ်ယောက်တည်း အခန်းထဲမှာ ကျန်ခဲ့ရလျှင်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ကြာရှည်ထိန်းနိုင်ပါ့မလား ကြောက်မိပါရဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ရှေ့မှာ -ီးမတောင်ချင်ဘူး။ သူဟာ စိတ်ရှုပ်စေတဲ့လူ။
'All right boys'
နည်းပြက သူ့စားပွဲခုံရှိရာမှ လှမ်းအော်ရင်း စကားပြောတယ်။ 'ဆရာမသွားပြီးနော် ။ ပြီးလုနီးပြီလားJohn? မင်း အကြမ်းထည်ဆွဲထား တာက လုံလောက်ပါပြီ။ detail ဖြည့်ဖို့က Andy မရှိလည်းရလောက်ပြီမဟုတ်လား? သူ ဒီနေ့ကိုယ်ဟန်ပြတာ လုံလောက်ပြီလေ'
'ဟုတ်ကဲ့ ပြီးလုနီးပါပြီ' သူကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်း နည်းပြဆရမကို ပြန်ဖြေလေရဲ့။
'ဘာလဲ?' ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းတွေလည်း ပေါက်ကွဲလုနီးပါး။
'ကောင်လေးတွေ နောက်ဆယ်မိနစ်ဆို studio ကပိတ်တော့မှာနော်။ လုပ်စရာအလုပ်လေးတွေ လက်စသပ်တော့'
'အိုကေ....နက်ဖြန်မှတွေ့မယ်။ Andy မင်းအတွက်နောက်ဆုံး check ကဒီမှာနော'် သူမစားပွဲပေါ်က ဖန်တုံးအောက်ကို ညွှန်ပြပါတယ်။
'Thank you again, မင်းအကူအညီက အံအားသင့်ဖို့ကောင်းတဲ့ အနုပညာမြောက်တွေပဲ'
ခဏနေတော့ အခန်းထဲက တဒေါက်ဒေါက်နှင့် ထွက်သွားတဲ့ သူမ အခန်းတံခါးကို ငြင်သာစွာပိတ်လိုက်သံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒီတော့မှ ဆိုတဲ့လူဆီက စကားပြောသံ ကြားရပေါ့။
'ဗျာ??' သူဘာကိုပြောချင်တာလည်း ကျွန်တော် မပေါက်ဖူးဖြစ်နေတယ်
'Excuse me?' သူကျွန်တော့်ကို အစပျိုးကစားပြီထင့်။ ပုံဆွဲစက္ကူကိုကြည့်လိုက် ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး စူးစိုက်ကြည့်လိုက်လုပ်ပြီးနောက် ပုံဆွဲခုံကနေ ကျွန်တော် ကိုဟ်ဟန်ပြ မတ်တပ်ရပ်နေရာကို လှမ်းလာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ငပဲကို လှမ်းကိုင်လိုက်တာ သူ့လက်ထဲ တဖြည်းဖြည်း မာပြီးကြီးလာရပေါ့။
'ဒါပိုကောင်းတယ်' ကျွန်တော့်ငပဲတဖြည်းဖြည်းမာလာတာကို သူ့လက်အစုံနှင့် သေချာခံစားတယ်။ 'အတန်းချိန်တလျှောက်လုံး မင်းငါ့ ကိုကြည့်နေတာ သိတယ်'
'မင်းတို့ straight boy တွေက မရနိုင်တဲ့ဟာကို အမြဲလိုချင်ကြတယ်'
'ယောက်ျားတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် မိန်းမတစ်ယောက် ဘာပဲဖြစ်နေနေ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး နောက်ဆုံးတော့။ မင်းမရနိုင်ဘူးသိလေ လိုချင်လေပဲ။ ပြီးတော့ ငါသိတယ် မင်းငါ့ကိုလိုချင်နေတာ'
အမိန့်အာဏာသံဆန်ဆန် သူ့အသံ tone က ကျွန်တော့်ကို မခံချင်စိတ်လိုလို ဘာလိုလို ခံစားရစေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အဲဒီ အသံက ပိုပိုပြီး သိချင်စိတ်ပြင်းပြစေတာ ကျွန်တော်က သူ့အတွက် တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် သူဟာ ကျွန်တော့်ကို တစ်ခုခုများ....။
'ပြော မင်းငါ့ကိုလိုအပ်နေတယ်၊ မင်းဟာ ငါ့အတွက် အားလုံးဆိုတာ...'
'What?' ထူးထူးဆန်းဆန်း ခံစားချက်တွေ စပြီးခံစားနေရပြီ။ စပြီး ဖြစ်နေခဲ့ပြီပဲ
'ပြောလေကွာ မင်းငါ့ကိုလိုချင်နေတယ်လို့ မင်းလိုချင်တာရနိုင်သားနဲ့'
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က လုံးဝပြောမထွက်။ မပြောဖြစ်ရုံလေး..။
သူပါးစပ်ကို အသာဟလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို သွင်းလိုက်တယ်။ ပူနွေးနေတဲ့အတွေ့အကြောင့် မမာ့တမာကနေ အလျားပြည့် အနံ ပြည့်ကျောက်သားဆိုင်အလား မာတောင်လာပါပြီ။ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကြားညှပ်ထားရင်း ပြုံးလိုက်ကာ 'Say it' တဲ့။
ကျွန်တော်အသံထွက်ပြောဖြစ်ဖို့ တုံ့ဆိုင်းနေဆဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုဖြစ်ပျက်နေတာနှင့် ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နေတာအပေါ် shock ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ သူဘာလုပ်နေတယ်၊ ဘာတွေကို ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးနေမိတယ်ဆိုတာရော။ လိင်စိတ်ခံစားမှု ကျွန်တော့်သာယာ မှုကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် မဆုံးဖြတ်နိုင်ဆဲ။
'Say it' သူကျွန်တော့်အမြှောက်တံကို သူ့ပါးစပ်ထဲရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင်သွင်းသလို လက်ချောင်းတွေနှင့်လည်း ကစားရဲ့။ တစ်ချိန်တည်းမှာ အထက်အောက်ပွတ်သပ်လက်ကစားပေးသလို ပါးစပ်ကလည်း တပြွတ်ပြွတ်စုပ်မှုတ်ပေးနေတာဗျ။ ဘယ်မိန်းကလေး တစ်ယောက်မှ ဒီလိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကျွန်တော့်ကိုမပြုစုပေးဖူးဘူး။ 'ပြောနော် ဒါမှမဟုတ်ရင် ငါရပ်လိုက်မှာ' ကျွန်တော့်ကိုခြောက် လှန့်ရော။
ကျွန်တော် ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်နေတော့ သူဆက်မလုပ်ဘဲရပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို သိမ်းဆည်းရင်း studio က ခွာဖို့ဟန်ပြင်တယ်။
'Okay fine' ကျွန်တော်အရှုံးပေးပါပြီ။
'မင်းကိုလိုနေတာကြာပြီ။ ပထမနေ့မြင်စကတည်းကပါ၊ မင်းငါ့ငပဲကို ဆက်ပြီးစုပ်မှုတ်ပေးတာကို လိုချင်ပါတယ်.....မင်းပါးစပ်ထဲကို ပန်းထည့်ချင်တယ် အရည်တွေ....I want'
မဆင်မခြင်စကားလုံးတွေလို့ပြောလို့ရမလားမသိ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းတာတွေဘာတွေ အဝေးရောက် ကုန်ပါပြီ။ သူထွက် သွားတော့မလားထင်လိုက်မိပေမဲ့ ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်။ ခံစားရမှုတွေကနေ ကယ်တင်ဖို့ သူပြန်လှည့်လာပါရဲ့။ ခဏနေက လုပ် ဆောင်ပေးသလို လက်တစ်ဖက်က ငပဲကိုပွတ်သပ်လှုပ်ရှားပေးရင်းနှုတ်ခမ်းအစုံကလည်း ပညာကုန်သုံးစေရင်း။ ကျွန်တော့်ကွမ်းသီးခေါင်း က အရည်ကြည်တွေစိမ့်ထွက်လာတာအများအပြားဖြစ်နေသလို သူသည်လည်း ဘောင်းဘီရှေ့ပိုင်းက ဇစ်ကွဲထွက်တော့မယ်။
တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အကြည့်တစ်ချက်စုံလိုက်မိပြီးနောက် နှစ်ဦးသား studio ရဲ့နောက်ဘက် အ၀တ်လဲခန်းထဲ ငြင်သာစွာတွန်း ထိုးလှုပ်ရှားရင်း နေရာရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့အ၀တ်အစားတွေကို အမြန်ချွတ်ပစ်လိုက်တာ သူ့ဒစ်ကအမြှောက်ကြီး အတိုင်း ဖြစ်နေရဲ့။ ကိုယ့်နှလုံးခုန်သံကိုယ်ကြားမိရအောင် ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားမိပေါ့။
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်အံ့သြမိတာခဏတော့ကြာတယ်။ ပေါင်ကြားက လုံးဝန်းရှည်လျားတဲ့သူ့ပစ္စညါးက ကျွန်တော့်ကိုဆွဲဆောင်မှုပြင်းနေတာ ကိုး။ ခါတိုင်း pussy များလိုနုညံ့မနေပေမဲ့ ကိုင်ရတာ သွေးခုန်နှုန်းတိုးစေပါရော။ မရဲတရဲ လက်နှင့်အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ခပ်ဖြေးဖြေး ထုပေးဖြစ်တယ် အစတော့။ နောက်တော့ ခပ်သွက်သွက် မြန်မြန်ပေါ့လေ။
'Suck it' သူ့အမိန့်ပေးတာ....ဟီး။
နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ တုန့်ဆိုင်းမိပေမဲ့ ပန်းသွေးရောင် သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲ သွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူကျွန်တော့်ငပဲ ကိုအရသာခံခဲ့သလို သူကျွန်တော့်ကို ပေးခဲ့တဲ့ဖီလင်မျိုးပေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်မိတာပေါ့။ အစက ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို တပြွတ် ပြွတ်စုပ်မိတယ် နို့သီးခေါင်းတွေကို ကလိသလိုမျိုး။ နောက်တော့ သူရဲ့အတင်းဖိကပ်လာမှုကြောင့် လည်ချောင်းထဲထိရောက်ကရော။ ခပ်ဖြေးဖြေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ကာ ပါးစပ်ထဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးတာကြောင့် ခဏအကြာမှာပဲ ကျွန်တော့် အာခံတွင်းထဲ ပျစ်ချွဲချွဲအရည် တွေ ပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ ချွေးစက်လေးတွေ ခိုသီးနေတဲ့ သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်း ရောင်မှားကာ သူ့အရည်တွေမျိုချလိုက်မိပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့သော အရည်တွေဟာ နှုတ်ခမ်းဖျားက လျှံကျလာရပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်ခုံနဲ့သုတ်လိုက်ပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ သူ့မျက်ဝန်းဆီ အကြည့်ရွေ့ ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ငြိမ်နေမိရော။
'မင်းအလှည်'့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ သူ့လက်တွေဟာ မာတောင်နေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကိုင်တွယ်ပါတယ် ခဏတာ။ မိနစ် အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေ ခရေပွင့်တွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငြင်သာစွာ ကိုယ်တွယ်ရင်း ကစားတယ်။ ဘာမှ.....ဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရသေးဘူးအဲဒီကိစ္စအတွက်ဆိုရင်တော့။ သူဘာဆက်လုပ်မလို့ပါလိမ့်နော်။ ကျွန်တော့်ရည်းစား ကောင်မလေးတွေတောင် မကိုင်စဖူး။ အား...သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေရှိရာကိုအပ်လိုက်ပြီး လျှာပူပူနွေးနွေးကြီးကိုထုတ်ကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ရစ်ဝိုက်ကစားတယ်။ ကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထကာ ကျွန်တော့်ငပဲက ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ခါနေရော။ ခပ်မာမာ လျှာဖျားလေးက ခရေ၀ကို ကလိတယ်။ အလုပ်နှစ်ခုကို သူတစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်နေတာ ၀ါသနာထင်ပါ့။ သူ့လက်ခလယ်ကို တံတွေး နှင့် စိုစွတ်နေဆဲ ခရေ၀ထဲ ဖိသွင်းရင်း အသွင်းအထုတ်လုပ်သလို အခြားလက်တစ်ဖက်ကလည်း ငပဲကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ ထု ပေးပါတယ်။ အစပိုင်းက ခပ်နှေးနှေးပေမဲ့ ခဏအကြာမှာတော့ မြန်သထက်မြန်။
'Tell me you want me,'
'Say it. Say you want me to make you cum.'
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းက တိုးတိုးလေးသာ သဘောတူဖြစ်ပေမဲ့ သူ့အကြင်နာအပြုအစုကြောင့် တင်ပါးတွေကို ကျစ် ခါးကိုကော့ခေါင်းကိုမော့ ကာ အားရပါးရပန်းထည့်လိုက်မိပါရောလေ။ ရင်တွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်တဲ့အထိ ကျေနပ်စိတ်ဖြစ်သွားမိသလိုပါပဲ။ သူ့နှုတ်ခမ်းစိုစိုစွတ်စွတ် ကို ခဏငေးဖြစ်ရင်း အတွေ့အကြုံသစ်ကြောင့် ကျွန်တော်ရှက်မိပြန်တယ်။
'ငါ ပန်းချီဆွဲတာအပြီးမသတ်ရသေးဘူး '
'ငါ့တိုက်ခန်းမှာ ဒီတစ်ပတ်အတောအတွင်း ကိုယ်ဟန်ပြပေးနိုင်မလား? သီးသန့်ပေါ့။ တနင်္လာနေ့ကျရင် မင်းကို လုပ်မယ်'
တိတ်ဆိတ်စွာငြိမ်သက်နေမိတဲ့ ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကို သူကမေးခွန်းတွေနဲ့နှိုးဆွလိုက်တယ်။ အလုပ်အကိုင်သစ်..... ကျွန်တော်တို့အတွက် အလုပ်အကိုင်သစ်အဖြစ် သူရွေးချယ်လိုက်ပြီထင်ပါ့။
ကျောင်းက အနုပညာအတန်းချိန်တွေမှာပဲ ကိုယ်ဟန်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် အခုတော့ အနုပညာမြောက်ပန်းချီကား ဖန်တီးဖို့အတွက် ကျွန်တော်ကူညီကိုယ်ဟန်ပြရမယ်။ ဟင်း....သက်ပျင်းခဏခဏချမိပေမဲ့ မငြင်းဆန်လိုက်မိပါ။
Studio တံခါးကိုသော့ခတ် အစောင့်ကြီးလက်၌အပ်ကာ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာဖြစ်တယ်။ပလက်ဖောင်းတလျှောက် ကောင်မလေးတွေ ကောင်ကလေးတွေကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲအခုမှ လူပျိုဘ၀ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ပေါက်စရဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ် ခံစားမိပါတယ်။
တိုက်ခန်းလှေခါးကတစ်ဆင့် ခပ်သွက်သွက် ကျွန်တော့်အခန်းကိုတက်လာမိစဉ်ခဏ ပထမထပ်ထောင့်ချိုးအရောက် လူတစ်ယောက် ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ရင်း ရယ်ဟဟ....။
Alex Aung (13 Oct 2010)
Posted by Alex Aung at 1:11 PM No comments: